NEWS COLLECTION: December 2011
မြန်မာသတင်းသမားများ လွတ်မြောက်ရေး ဖိအားပေးရန် ကုလကို တောင်းဆိုမည်
မြန်မာ နိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် တွေမှာ ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ သတင်း သမား တွေကို လွှတ်ပေးဖို့ အတွက် ကုလ သမဂ္ဂက နေတဆင့် အစိုးရကို ဖိအား ပေးဖို့ လုပ်ဆောင် မယ်လို့ အရှေ့တောင် အာရှ သတင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ (SEAPA) က ပြောပါတယ်။
SEAPA က ဒေသတွင်း အဖွဲ့ အစည်း တခု ဖြစ်တာနဲ့ အညီ အကျဉ်းကျ ခံနေရတဲ့ သတင်း သမား ၁၁ ဦး လွတ်မြောက် လာရေး အတွက် ကုလ သမဂ္ဂ ကနေ မြန်မာ အစိုးရကို ဖိအားပေး ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ SEAPA အမှုဆောင် ညွန်ကြား ရေးမှူး Gayathry Venkiteswaran က ပြောကြား လိုက်တာပါ။
“ဒေသတွင်း ရှေ့နေ တွေနဲ့​ ​မြန်မာပြည် တွင်းက ရှေ့နေတွေ ကိုလည်း သတင်းသမား ကိစ္စ အတွက်​ ​ထောက်ခံကူညီ တိုက်ပွဲ ၀င်ဖို့ ကျမတို့ အားပေး ချင်ပါ တယ်။ ဒီကိစ္စ ကတော့ စိန်ခေါ်မှုတချို့ရှိ နေပေမယ့် ကျမတို့ လုပ်ချင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသတွင်း အဖွဲ့ အစည်း အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကုလ သမဂ္ဂ အဆင့် ထိကို တင်ပြပြီး တော့ မြန်မာ အစိုးရကို ဖိအား ပေးဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။”
ဒီကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း ဒီနှစ်ထဲ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က SEAPA ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ အောက်တိုဘာလမှာ မြန်မာအစိုးရက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၂၀ လောက်မှာ စာရေးဆရာ ၅ ယောက်လောက် ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဗွီဒီယို ဂျာနယ်လစ်နဲ့ သတင်းသမား နောက် ထပ် ၁၁ ယောက်ရှိနေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်ကို အပြင်က သတင်းမီဒီယာတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံတွင်းက သူတို့ရဲ့ ကွန်ရက်ကနေ တဆင့် အတည်ပြု နိုင်တာ ဖြစ်ပေ မယ့် ဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“တချို့တွေကလည်း တိတ်တဆိတ်နဲ့ သတင်းသမား လုပ်ဆောင်နေတာတွေကလည်း ရှိနေတော့ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲမှာ သတင်းသမား တွေရှိမယ်ဆိုတာကတော့ ယုံကြည်ပါ” လို့ မစ္စ Gayathry Venkiteswaran က ပြောသွား တာပါ။
SEAPA က ထောက်ပြထားတဲ့ ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာသတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမား ၁၁ဦးကတော့ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် သန့်ဇင်အောင်၊ ကဗျာဆရာ မင်းဟန်၊ ဘလော့ဂ်ဂါ နေဘုန်းလတ်၊ ကန္တာရ၀တီတိုင်း အယ်ဒီတာ ညီညီထွန်း၊ သတင်းထောက် ဇေယျာဦး၊ အားကစား ကလောင်ရှင် ဇော်သက်ထွေးနဲ့ ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက်တွေဖြစ်တဲ့ မလှလှဝင်း၊ ကိုငွေစိုးလင်း၊ ဂီတသမား ကိုဝင်းမော်၊ ဓာတ်ပုံ သတင်း ထောက် စည်သူဇေယျ၊ စာရေး ဆရာဦးဇေယျတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုးကူးခွေ ၀န်ကြီး အားပေး
သဲသဲ on December 31, 2011
ရုပ်ရှင် သရုပ် ဆောင်များ ပါဝင် ကပြသည့် မုဒိတာ လွင်ပြင် အငြိမ့် VCD သည် ရန်ကုန်မြို့ ခိုးကူး ခွေဈေး ကွက်တွင် အရောင်းသွက် နေပြီး ၀န်ကြီး တဦး ကပင် ၀ယ်ယူ အားပေး ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ခိုးကူးတွေ တအား အလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး ၀န်ကြီးတောင် မီးပွိုင့်မှာ သူ့ကို လာရောင်းလို့ တချပ် ၀ယ်ခဲ့သေးတယ် တဲ့” ဟု မုဒိတာလွင်ပြင်၏ ဖန်တီးရှင် ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ခိုးကူး ဈေးကွက်ရောက် မုဒိတာ လွင်ပြင်သည် လူကြိုက် များသည့် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်း တွဲများကိုပင် ကျော်တက် သွားပြီဟု ပရိသတ် တဦးက ဆိုသည်။
“လမ်းဘေး ခိုးကူးဆိုင်တွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ကိုရီးယားခွေတောင် နောက်ရောက်ကုန်တယ်။ မုဒိတာလွင်ပြင် အငြိမ့်ခွေက တန်းစီနေ တာပဲ။ ခိုးကူးတွေ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်တယ်။ တအား ရောင်းရတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ ပရိသတ်တဦးက ဆိုသည်။
သီချင်း ပဟေဠိ ခွင်တွင် မကြာသေး မီက ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော လိုင်စင် မဲ့ကား၊ နိုင်ငံခြားငွေ တရားဝင် လဲလှယ်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး လူရွှင်တော် များ ၏ သီချင်းဆို၊ ပြက်လုံး ထုတ်မှုများ ပါဝင်သည်။
မင်းသမီး မိုးပြည့်ပြည့်မောင်၊ အေးမြတ်သူ၊ မိုးယုစံ၊ အိချောပို၊ လူရွှင်တော်များ အဖြစ် ဝေဠုကျော်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ခန့်စည်သူ၊ နေမင်း၊ ကြက်ဖ နှင့် ပြေတီဦး တို့ ပါဝင်သော ထိုအငြိမ့်ကို ပြေတီဦး ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ရန်ပုံငွေ အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကပြ ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
မုဒိတာလွင်ပြင်တွင် ပါဝင်သူများသည် အငြိမ့်လောကသားများ မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ကပြ တင်ဆက်မှုများကို သဘောကျ သည်ဟု ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဗေဒါက ပြောသည်။
“ကောင်းတယ်လို့ ပြောရ မှာပါ။ ဘာကြောင့် ပြောရ တာလဲ ဆိုရင် သူတို့က လူရွှင်တော် အစစ် တွေတော့ မဟုတ်ဘူး ပေ့ါနော်။ သူတို့ အတိုင်း အတာအရ သူတို့ လုပ်သွား ပေးတာ ကတော့ ကောင်းပါတယ်။ နောက် တချက်က ထိထိမိမိ ရှိတာ လေးတွေ ပါတာလေး တွေလည်း ကောင်းပါတယ်” ဟု လူရွှင်တော် ဗေဒါက ပြောသည်။
မုဒိတာလွင်ပြင် အငြိမ့် မတိုင်ခင် နှင်းဆီရင်ခွင်၊ နှင်းဆီသခင်၊ ထာဝရနှင်းဆီ၊ နှစ်သစ်နှင်းဆီ စသည့် မောင်မျိုးမင်း၏ အငြိမ့်များကို ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပ ပရိသတ်များက နှစ်သက် အားပေးခဲ့ကြသည်။
ရခိုင် ဘုရင့် နိုင်ငံတော် အချုပ် အခြာ အာဏာ ကျဆုံးခဲ့ ရတာဟာ ရခိုင် အမျိုး သားတွေ စည်းလုံး ညီညွှတ်မူ ပြိုကွဲ သွားတဲ့ အတွက် ကျဆုံး ရတာ ဖြစ်တယ်။ အထူး သဖြင့် ရခိုင် အချင်းချင်း အာဏာလု ကြပြီး ခေါင်းဆောင် တွေက မိမိတို့ အာဏာ ရရှိရေး ကိုဘဲ ကြည့်ခဲ့ကြ တယ်။ အရေးကြီး ဆုံးက မိမိ အမျိုးသားရေး ပြဿနာကို မိမိ အတွင်းမှာ မဖြေရှင်းဘဲ သူတစ်ပါးကို သွားခေါ် ရာကနေ ခုလို ထီးကျိုး စည်ပေါက် ကျွန်သဘောက် ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ကြ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ခန်းစာ ယူသင့် တာက ခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ ကျော်ရှိပြီ။ နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ ကျော်မှာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သင်္ခန်း စာ မယူနိုင်ကြ သေးဘူး ဆိုရင်၊ ယူဖို့ မထိုက်တန် ဘူးလို့ မြင်နေ ပြောနေ ကြမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင် တပြည်လုံး သိပ်မကြာခင် ပျောက် သွား လိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုပါ တယ်။
ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်လူငယ်တွေအားလုံး၊ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ ရခိုင်လူငယ်တွေ အားလုံးဟာ ခုလို နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာ ဏာကျဆုံးတဲ့နေ့ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပသွားရမယ်။ သမိုင်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ သက်ဆိုင်ပီး အရေးကြီးတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ကို ကျင်းပ ဖေါ်ထုတ်တာဟာ လုပ်ရမယ့် အလုပ် ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ပြင် ဒီလို ကျင်းပတာဟာ ရခိုင်ရဲ့ သတ္တိ၊ ရခိုင်ရဲ့ ဇွဲ၊ ရခိုင်ရဲ့ ၀ိရိယ ကို သမိုင်းစဉ်နဲ့ ချီပြီး ဖေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရလို့ ပြောပေမယ့် တကယ့် ပြည် ထောင်စု အစစ် အမှန် မဟုတ်။ ဗမာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေကို အသေအချာ လေ့လာကြည့်၊ ပြည်ထောင်စု စနစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် တို့မှာ တဖြည်းဖြည်း ဖွတ်ကျောကို ပြာစုသလို ဆင်းရဲ လာတာဟာ အခုထိ ဆင်းရဲ လာတုန်း ဖြစ် တယ်။ ထွက်ပေါက် မရှိသေးဘူး။
တကယ်တန်း စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တည်ထောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ညီအစ်ကို မောင်နှမ မခွဲဘဲ ရခိုင် စကားကို ကချင်က ပြောတတ်ရမယ်။ မွန်စကားကို ရခိုင်က ပြောနိုင်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ တလမ်း မောင်း စနစ်မဖြစ်ရအောင် အစိုးရ က ညွန်ပြပေးရမယ်။ အစိုးရက ဒီကိစ္စတွေမှာ ရခိုင်နိုင်ငံမှာ ရခိုင်သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်တွေ ကို သင်ပေး၊ ရခိုင်စာကို သင်ပေး၊ အဲဒီလို စာ ပေ တွေကို သင်ကြားပေး တဲ့အတွက် ကြောင့် ရခိုင်သား တွေဟာ စာပေမှာ ပိုမို ကြွယ်ဝ လာမယ်။ ကချင်ပြည်မှာလည်း ပိုမိုကြွယ်ဝလာ မယ်။ အဲဒီလမ်းကို ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တဆင့် ခံအနေနဲ့ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကို လမ်းပိတ်ထားတယ်လို့ ဆရာ ကြီးက မြင်တယ်။ အဲဒါ သမိုင်း ရှု့ထောင့်က ပြော တာ။ ဒီလို လမ်းပိတ်ထားတာဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က စပြီး ပိတ်ထားခဲ့တာဟာ ခုချိန်ထိ ပိတ်ထားတုန်း ဖြစ်တယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | စနေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁
။သောကြာ နေ့က အိန္ဒိယ အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေကို တိုက်ခတ် ခဲ့သော ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း အမည် “သိမ်း” (Thane) အား မြန်မာ နိုင်ငံက ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း India Today တွင် ရေးသား ထားသည်။
အိန္ဒိယမိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒဌာန၏ ပြောကြားချက်အရ၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို အခြေပြုတိုက်ခတ်သော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနာမည်များအား အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ မော်လဒိုက်၊ မြန်မာ၊ အိုမန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများက အလှည့်ကျ နာမည်ပေးသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ကော်မရှင်တို့မှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ယခုကဲသို့ နာမည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ ရှစ်နိုင်ငံသည် အမည် ၆၄ ခုအား ပြင်ဆင်ထားပြီး အလှည့်ကျ ကြေညာသည်။ ယခု ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်သို့ ရွေ့လျားနေသော ဆိုင်ကလုံးနာမည် သိမ်း (Thane) အား မြန်မာ နိုင်ငံမှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များက ပေးခဲ့သော နိုင်ငံနှင့် ဆိုင်ကလုံး နာမည်များမှာ။
လိုင်လာ (ပါကစ္စတန်)၊ နစ်ရှား (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ၂၀၁၀
ဖျန်း (မြန်မာ) ၂၀၀၉
အိုင်လာ (မော်လဒိုက်) ၂၀၀၉
ဘီဂျလီး (အိန္ဒိယ) ၂၀၀၉
ရက်ရ်ှမီး (သီရိလင်္ကာ) ၂၀၀၈
နာဂစ် (ပါကစ္စတန်) ၂၀၀၈
သောကြာနေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် “သိမ်း”မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း ပွန်ဒီချယ်ရီကမ်းခြေနှင့် တမီလ်နာ ဒူးပြည်နယ် ကမ်း ခြေ မှ လူ ၃၅ ဦး သေဆုံး ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း စနေနေ့ ထုတ် Times of India သတင်း စာတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
ဤမုန်တိုင်းအရှိကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ရခိုင်နှင့် ကယားပြည် နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပြီး ကမ်းရိုးတမ်းနှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့မိုးလေ၀သနှင့် ဗလဗေ ဒမှ ထုတ်ပြန်သတိပေးထားသည်။
မြန်မာပြည် အတွက် အလှုပ် အရမ်း၊ အပြောင်း အလဲနှင့် မမျှော်လင့် တာတွေ ဖြစ်ခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကြီးကား နိဋ္ဌိတံ ပေတော့မည်။ တနှစ်တာ အရေးကို ဦးရုက္ခစိုး သည်တစိမ့်စိမ့် တွေး၏။ တရေး ရေးမြင်၏။ ဆင်ခြင် ကြည့်၏။ မြန်မာ့ အရေး ဗလုံး ဗထွေးတွင် အားမလို အားမရ ဖြစ်ခြင်း ဟူသော လေပြင်း အောက်၌ မျှော်လင့်ခြင်း ဟူသော မီးတောက် ကလေး ကလည်း တမျှင်းမျှင်း တောက်လောင် နေ၏။
ဦးရုက္ခစိုး၏ အာရုံဝယ် မြစ်ဆုံတွေ၊ ကချင်တွေ၊ ခွပ်ဒေါင်းတွေ၊ NLD တွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ လွှတ်တော်တွေ စီရရီပေါ်နေသည်။ ပြည်ထဲအရေး ပေါက်နှင့် ကျေးဟု ဆိုကြသည်။ မြန်မာပြည်သည် ဘယ်လောက် စောင့်ရဦးမည်နည်း။ ချင်းမိုင်ဆောင်း အေးစိမ့်စိမ့်၌ ဤတောင်တောင်အီအီ မနောအတွေးစဉ်ကို ဖျက်သည်ကား ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်တို့၏ ဆူညံပွက်လောရိုက်လာသော အသံပေတည်း။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ မူးကြရှုးကြ မောင်းကြရင်း နှစ်စဉ်သေကြလို့ ချင်းမိုင်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေကို အစစ်အဆေး ဒဏ်ရိုက်တာတွေ ကြမ်းတယ်ဗျို့။ နှစ်သစ်ကူးမှာ သတိထားမှ …။ ဘာတွေများ ငြိမ်နေတာလဲ ဦးရုက္ခစိုးရဲ့။
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ နှစ်တနှစ်က ပျက်ခြင်းသဘောနဲ့ ကုန်တော့မယ် မဟုတ်လား။ ၂၀၁၁ ရဲ့ အဖြစ်သနစ်ကို သုံးသပ်နေတာပေါ့။
ကြွက်စုတ်က ထင်ရာမြင်ရာကို စွတ်ပြောလေ၏။
ကြွက်စုတ် ။ ။ ဘာလဲ … ဦးရုက္ခစိုးက ပြည်တော်ပြန်မလို့လား။ သံရုံးမှာ ဗီဇာတွေ ပေးနေပြီဗျ။ ဦးရုက္ခစိုးလည်း နတ်ဗီဇာရရင် ကိုယ်ဖျောက်ပြီး အထဲ ဝင်ဝင်ကြည့်နေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ တော်စမ်းပါ ကြွက်စုတ်ရယ်။ မြန်မာပြည်အရေး အဖက်ဖက်ကတွေးပြီး စိတ်ကလေးလာလိုက်၊ ဖြေစရာလေးတွေနဲ့ မျှော်လင့်အားတက်လိုက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ငါ နတ်သက်မကြွေခင်တော့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရပြီး ရွှေပြည်တော်ကြီးဖြစ်တာ မြင်ချင်သေးရဲ့။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ နှစ်သစ်မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေ ကြေညာမယ်လို့တော့ ကြားတာပါပဲ ဦးရုက္ခစိုးရယ်။
ကြွက်စုတ် ။ ။ ရန်ကုန်က အောက်ဆိုက်ကားတွေလိုပေါ့။ အခုထွက်မှာ … ဆွဲဆရာရေ့ ဆိုပြီး စပယ်ယာက အော်၊ ကားဆရာကလည်း စက်သံပြင်းပြင်းနဲ့ ဟန်ရေးပြ … အခုထွက်မှာ … ဆွဲဆရာရေ့နဲ့ပဲ နာရီဝက်လည်း မထွက် … တနာရီလည်း မထွက်သလိုပေါ့ … နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလည်း အခုလွှတ်မယ် … တော်ကြာလွှတ်မယ် … လွှတ်ချင်မှ လွှတ်မယ်ပေါ့။
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ ကချင်ဘက်မှာ အပစ်က မရပ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်း မလွတ်သေး၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်း ဘယ်တော့ လာမယ် မသိ၊ ရင်လေး၏။ ငါကပဲ အစဉ်းစား လွန်နေလို့လားမသိ။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ သိပ်မစဉ်းစားပါနဲ့ ဦးရုက္ခစိုးရယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေလည်း ရှိပြီ၊ ဒေါ်လာကိုလည်း လမ်းဘေးမှာ ရောင်းဝယ်စရာ မလိုတော့ဘူး၊ ငွေလဲကောင်တာတွေရှိပြီ၊ ကားတွေလည်း ရောင်းပေးနေပြီ။ ဖုန်းတွေလည်း ချပေးနေပြီ။ အဲ … အဲ … အင်တာနက်ကတော့ နှေးတုန်းပေါ့လေ။ ကျနော်တောင် အထဲပြန်ကြည့်မလို့ ကြွက်စုတ်ကို အဖော်စပ်နေတာ။
ကြွက်စုတ် ။ ။ မင်းသွားချင်တာ ငါသိပါတယ် ဖိုးရှုပ်ရယ်၊ မင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင် သွားလျှောက်မလို့ မဟုတ်လား။ ဗီလိန်နေရာတော့ ရမှာပေါ့။ ပြီးတော့ ကာယအလှမယ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ မြန်မာအဝတ်အစား အစား နိုင်ငံတကာက ပြိုင်သလို ပြိုင်ရတော့မယ် ဆိုကတည်းက မင်း အထဲပြန်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်နေတာ မဟုတ်လား။
ဖိုးရှုပ်ကား အောင့်သက်သက် ဖြစ်သွားလေသည်။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ မင်းကသာ အထဲမှာ ဘာသင်တန်း၊ ညာသင်တန်းတွေ ဖွင့်မယ်၊ NGO ထောင်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတာ မဟုတ်လား။ အထဲမှာ NGO တွေ ပြည့်လို့ဟေ့။ မင်း ခြေချလို့ ရမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ “ဖွ” လိုက်ရမလား။ မစ္စတာ ကြွက်စုတ်သည် NGO ထောင်၊ ဘာညာ သင်တန်းဖွင့်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်လည်း လုပ်တော့ပါမည်လို့ … ဟား … ဟား … ဟား
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ ဟေ့ … တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး လုပ်ရာမှာ အားလုံးကိုယ်စီ ကျရာနေရာက လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါကွ။ သူလုပ်တာမှ ကောင်းတယ်၊ ငါလုပ်တာမှ ကောင်းတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ ကျနော်တို့က ထားပါတော့။ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကိုယ်တိုင်က ကိုးရိုးကားရားသမားတွေ ပါနေသေးတယ် ဦးရုက္ခစိုးရဲ့။ ပိဋကတ် အိုးကွဲ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးတို့၊ သတင်းစာ ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ မသိတဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်မင်းတို့၊ အရင်ရွေးကောက်ပွဲက ထွင်လုံးတွေနဲ့ မဲဆွယ်နေသေးတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီတို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နားမလည်တဲ့ ဝန်မင်းတို့ပေါ့ … အစုံပါပဲ။
ကြွက်စုတ် ။ ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် မင်းကတော့ ပြန်ရမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒိုနာတွေ စပွန်ဆာမပေးတော့ရင် မင်းတို့ အပြင်က ဂျာနယ်လစ် တွေလည်း … ပြာနယ်လစ်ဖြစ်တော့မှာ။ အထဲပြန်ပြီး ဂျာနယ်မှာ သွားရေးပေါ့ကွာ။ အရေးမတတ်ရင်တော့ မီဒီယာဥပဒေဆိုတာကြီး လာတော့မယ်နော်၊ တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ နို့တစ်စာတွေလည်း မျှော်လင့်ထား ဖိုးရှုပ်ရေ။
ဖိုးရှုပ် ။ ။ အောင်မယ် … စတ္တုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ဆိုတာ အရေးပါ လာပါပြီကွ။ ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် သတင်းစာ ထဲမှာ ဆောင်းပါးရေး၊ အစိုးရ အရာရှိ တဦးကလည်း အမည်မဖော်လိုသူဆိုပြီး အပြင်ကို ဆောင်းပါးတွေ ရေးပို့ နေကြပါပြီ။ တို့ ဒီက ဒေဝါလီ မဂ္ဂဇင်းက အယ်ဒီတာ မင်းလည်း အထဲမှာ မီဒီယာ သွားထောင်မယ် ဆိုပဲကွ … ပြောကြတာပဲ။
စကားကောင်းနေကြခိုက် ဦးရုက္ခစိုး မိုဘိုင်းဖုန်းမှ အသံမြည်လာ၏။
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ မက်ဆေ့ခ်ျ ဝင်လာတာဟေ့ … ။
ဖိုးရှုပ်ရော ကြွက်စုတ်ပါ “ဦးသန်းရွှေ ဆီကလား” ဟု တပြိုင်တည်း မေးလိုက်မိသည်။ ဦးရုက္ခစိုးကိုတော့ ပြည်တော်ဝင်ဖို့ ဖိတ်ပြီထင်တယ်၊ သမ္မတ ကြီးက ဖိုရမ် တက်ခိုင်း တာလား မသိဘူး၊ စာတမ်း ဖတ်ဖို့ ထင်ပါ့ ဟူ၍လည်း ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်တို့ တယောက်တပေါက် ပြောနေ ကြလေ သည်။
ဦးရုက္ခစိုး ။ ။ သယ် … တော်ကြစမ်း … ဘယ်ကလာ … ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ဖိတ်တာ တဲ့ကွ။ အခု တခေါက် တွေ့ဆုံမှုမှာ မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ နတ်မင်း များကို ပင့်ဖိတ် တွေ့ဆုံ မတဲ့။ တိုင်းပြည်ကို ဘီလူး မစီးရေး နတ်မင်းများ ဒေဝတာ ပါတီ ထောင်သင့် မထောင်သင့် ဆွေးနွေးသင့် ဆွေးနွေးရဦးမယ်။ ငါကလည်း တွေ့ချင် ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ။ ကဲ … မတိမ်းမစောင်း ဗိန်းဗောင်းနဲ့ ခုပဲ ကြွပြီဟေ့။ မင်းတို့ နေရစ်ခဲ့ပေဦး။
ဦးရုက္ခစိုးကား ပြောပြောဆိုဆို ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ ကိုယ်ပျောက်လေပြီ။ ပြည်တော်ဝင်ရေး အာပေါက် အောင် ငြင်းနေ ကြေသော ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ် တို့ကား ချင်းမိုင်မြို့ ဆောင်းအေး အေးတွင် ငုတ်တုတ် ကျန်ခဲ့ကြ လေသတည်း။ ။
KIA တပ်စခန်း တခု ဆုတ်ခွာပေးရ
အစိုးရတပ်များ၏ ၅ ရက်ကြာ ထိုးစစ်ဆင်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ရှမ်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့နယ်ရှိ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ၏ တပ်မဟာ ၄ထိန်းချုပ်ဒေသမှ နမ့်လတ် တပ်စခန်း တခုကို ဆုတ်ခွာပေး လိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်၏ ၁၂၀၊ ၈၁ မမ အမြောက်များနှင့် ပစ်ခတ်သည့် ဒဏ်ကို မခံနိုင်သောကြောင့် ဆုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကချင် လွတ်လပ် ရေး အဖွဲ့ (KIO) တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“သူတို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တာ ခပ်စိတ်စိတ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီ စခန်းကနေ ဖယ်ပေးလိုက်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
KIA တပ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် အတွက် အစိုးရတပ်၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း အမှတ် ၆၈၊ ၅၀၇ တပ်ရင်းမှ စစ်သည် အင်အား ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် အပတ် ၂၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်၍ ၂၈ ရက်နေ့ အထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အစိုးရဘက်ကတော့ ဒါကို အရေးကြီးတဲ့ နေရာလို့ သူတို့ သတ်မှတ်ပုံ ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ လမ်းကြောင်း ဘက်က နေပြီး ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဟာ အဲဒီဘက်က ဖြတ်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်၊ ကြည့်ရတာ သူတို့ အဲဒီဘက်ကို ရေနံနဲ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း အတွက် အဲဒီစခန်းကို ၀င်တိုက်တယ်လို့ မြင်တယ်”ဟု ဦးလနန်က ဆက်ပြောသည်။
တိုက်ပွဲများတွင် လတ်တလော ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု အခြေအနေကို မသိရှိရသေး သော်လည်း အစိုးရ၏ လက်နက်ကြီး ဒဏ်ကြောင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး မူးဝေသည့် ဝေဒနာ ခံစားရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရတပ်က သုံးခဲ့သည့် လက်နက်ကြီးများတွင် ဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ဦးလနန်က ပြောသည်။ ၎င်း၏ ပြောဆိုချက်အား သီးခြား အတည်မပြု နိုင်သော်လည်း ဧရာဝတီမှ မကြာသေးမီက ရရှိခဲ့သော ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ အရ KIA တပ်ဖွဲ့ တချို့ စစ်မြေပြင်တွင် ဓာတ်ငွေ့ကာ မျက်နှာဖုံးများ တပ်ဆင်၍ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့က ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ KIA က ဆွေးနွေးလိုကြောင်းလည်း မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း စာပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ ဦးအောင်သောင်း၊ ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်တို့နှင့် KIO ခေါင်းဆောင်များ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်၍ အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် KIA ထိန်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာဒေသ တ၀ိုက်၌ ဒုက္ခသည် ၃၄၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်၊ မံစီ၊ မိုင်ဂျာယန် စသည်တို့ တွင်လည်း ဒုက္ခသည်များ ထပ်မံ တိုးပွားလာကြောင်း သိရသည်။
KIA သည် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ နှစ်ဘက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ သည်။ အပစ်ရပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ KIA ထိန်းချုပ် ဒေသများတွင် စစ်ရေးပဋိပက္ခတချို့ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော် လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်ကို ၁၇ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လတွင်စတင်၍ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလည်း ပျက်ပြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပရဆေးပါ ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုပြင်းထန်
ယမန် နေ့က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာ​ ​ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲ မှု ပြင်းထန်ရတာဟာ ပရဆေး ဂိုဒေါင်ထဲ​ ​လှောင်ထားတဲ့ ဇ၀က်သာ၊ ယမ်းစိမ်းစတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထဲပါတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်း တွေကြောင့် လို့​​ ​ဓာ​တု​ဗေဒ ပညာရှင် တွေက ထုတ်ဖော် ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
ဂိုဒေါင်ထဲ လှောင်ထားတဲ့ထဲပါတဲ့ ဇ၀က်သာဟာ ဓာတုဗေဒ အခေါ် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်၊ ယမ်းစိမ်းက ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်တို့ ဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာ​ ​ပေါက်ကွဲ​ ​စေတတ်တဲ့​ ​ဓာတုပစ္စည်းတွေ​ ​ဖြစ်တဲ့​ အကြောင်းနဲ့​ ​ပေါက်ကွဲမှု​ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က အငြိမ်းစား ဓာတုဗေဒ ပါမောက္ခ​ ​ဒေါက်တာ​ ခင်မောင်ညိုက​ ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဇ၀က်သာက အမိုနီယမ်ဆိုတော့ ယမ်းစိမ်းက ဆိုဒီယံနိုက်ထရိတ်၊ ဒါတွေက ရေနဲ့ ပေါင်းသွားပြီးတော့ အပူတိုက်ရင် ပေါက်တာပဲ။ ကျနော်သိသလောက်က ဘေးက ဂိုဒေါင်မှာ လျှပ်စစ်ဝါယာလျှော့ဖြစ်တယ်။ လျှော့ဖြစ်တော့ မီးလောင်တော့ သူ့လည်း ဆက်လောင်တော့ ဘေးက မလောင်အောင် ရေဖြန်းတယ်။ ရေဖြန်းတော့ အဲဒီ အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ရော ဆိုဒီယံနိုက်ထရိတ်တွေရော အကုန်လုံးက စုပြီးတော့ အောက်ကို စီးဆင်းလာတယ်။ အဲဒီမီးနဲ့တွေ့တော့ ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ အများကြီးပေါက်တာ။ တချက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီနားမှာ ပေါက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီးတော့မှ အကြီးကြီး ထပေါက်တာ။”
ဒီလို ပေါက်ကွဲစေ တတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လူနေ အိမ်ခြေတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာတွေမှာ တတ်သိ နားလည်တဲ့ ပညာရှင် တွေဆီက အကြံ ဉာဏ် ရယူပြီး စနစ်တကျ သိုလှောင် သိမ်းဆည်း ထားသင့် တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဟာ ပရဆေးအိတ်တွေကို မီးလောင်ပြီး ဓာတ်ပြု ပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်။ ပရဆေးဂိုဒေါင်ထဲမှာ ဇ၀က်သာ အိတ် ၄၀၀၊ ယမ်းစိမ်း ပိဿာ ၅၀ ၀င် အိတ် ၅၀ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လို့ ဒီနေ့ထုတ် သတင်းစာတွေမှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခု မီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဂိုဒေါင်တွေဟာ စီးပွားကူးသန်းပိုင် ဂိုဒေါင်တွေလိုလုို၊ စီးပွားရေး ဦးပိုင်ဂိုဒေါင်လိုလို ပြောနေကြပြီး အတိအကျ စုံစမ်းလို့ မရသေးပါဘူး။
အစိုးရ သတင်းစာ ထဲမှာလည်း ဘယ်ဂိုဒေါင်က စတင် လောင်ကျွမ်းတယ်၊ ဘယ်ဂိုဒေါင်မှာ ပရဆေး တွေထားတယ်၊ ယမ်းစိမ်း ပိဿာ ဘယ်လောက် သိုလှောင် ထားတယ် ဆိုတာသာ ရေးထားပြီး ဘယ်သူတွေ ပိုင်တယ် ဆိုတာမျိူးလည်း ရေးထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
ဒီအပေါ်မှာ သယင်္န်းကျွန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ခုလို မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုပါတယ်။
“အခုဟာတော့ တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ ဒီမှာအစဉ်အဆက် ဖြစ်နေတာကတော့ အာဏာရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက လုပ်တဲ့ စက်ရုံတို့၊ အလုပ် ရုံတို့၊ ဂိုဒေါင်တို့ဆိုရင် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း မပြုသလောက်ဘဲ။ အဲဒီတော့ ပွင့်လင်းမှု၊ တာဝန်ခံမှု မရှိတော့ အခုလို လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ သေကျေပြီးတော့ လူပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရတဲ့ စိတ်မသက်သာစရာ အကြောင်းအရင်းတွေကို ဖန်တီးခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၈၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ အစိုးရသတင်းစာမှာ ဖော်ပြပြီး လူပေါင်း တထောင်ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
KIA မူဆယ် တိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်သား ၂ ဦးသေ ၃ ဦးဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ ကြာသပတေး နေ့လည် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ (KIA) ၏ တိုက်ခိုက် မှုတွင် မြန်မာ အစိုးရ တပ်သား တဦးနှင့် ရဲတပ် သားတဦး သေဆုံး၍ သုံးဦး ဒဏ်ရာ ရသည်ဟု မျက်မြင် များပြောသည်။
၁၀၅ မိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုံအနီး နမ်တောင်းကျေးရွာ (Namtau)တွင် KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃၆ က ထိုသို့ ချုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA နှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က KIA အပေါ်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် ၎င်း၏တပ်အား ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက် လွန်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်မှ အင်အား ၅၀၀ ရှိ မြန်မာတပ်များ KIA တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၈ ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်များတွင် ထိုတပ်ရင်း ၈ ဒေသ ရွှေ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတလျှောက် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေသည် ဟု သိရသည်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ၇၀% ကျော်လုပ်ဆောင်နေသည့် ၁၀၅ မိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုံသို့ ဆက်သွယ်ပေးသည့် မန္တလေး-မူဆယ် လမ်းတစ်လျှောက် ဇွန်လ နှောင်းပိုင်း ကတည်းက တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေခြင်းဖြစ်သည်။
ကော့မူးရာ ခေါ် ၀မ်ခ စခန်းဟာ မဲဆောက်မြို့ ကနေ မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲ ကားမောင်း ရပြီး ထိုင်းဘက်ကမ်း ၀မ်ခရွာ အထိ လိုင်းကား တွေ တနာရီ တစီးနှုန်း ပြေးနေ တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်းသစ်တွေနဲ့ အခိုင်မာ ဆောက်ထားတဲ့ တံတားကြီး ၂ ခုက ၀မ်ခနဲ့ ကော့မူးရာ စခန်း ကြားရှိ သောင်ရင်း မြစ်ကို ဖြတ်ကူး ဖောက်ထား တဲ့အတွက် မဲဆောက်က လာတဲ့ အရေးကြီး ကားတွေဟာ နာရီဝက် အတွင်း ကော့မူးရာ စခန်းထဲ အထိ ရောက်နိုင်တဲ့ အနေထား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူပြီး KNU အထူးတပ်ရင်း ၁၀၁ အခြေစိုက်တဲ့စခန်း ဖြစ်တာကြောင့် ABSDF ပထမ အကြိမ်ညီလာခံ ကျင်းပ တဲ့နေရာ ဖြစ်လာတာလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ညီလာခံကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၅ ရက်နေ့အထိ ကော့မူးရာမှာ ကျင်းပတာဖြစ်ပေမယ့် ABSDF ဆိုတဲ့အမည်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းက သီဘောဘိုးစခန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ကရင်နယ်မြေရောက် ကျောင်းသားစခန်း ၅ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဗကသကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့ အစည်းဝေးကနေ စတင်ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ အဲဒီ အစည်းဝေးကိုတက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား တွေက ပြောပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ABSDF (All Burma Student’s Democratic Front) သို့မဟုတ် မကဒတ (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး) အမည်နဲ့ ဗဟိုကော်မီတီ တရားဝင် ဖြစ်လာတာကတော့ ကော့မူးရာစခန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမအကြိမ် ညီလာခံ ပြီးမှ ဖြစ်ပါတယ်။
မူလဖွဲ့စည်းစဉ်က ABSDF တပ်ဦးအမည်သာပါပြီး ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုတဲ့ အမည်ကတော့ သံလွင်စခန်း အရေးပေါ်ညီလာခံ မ တိုင်ခင်လေး မှာမှ ပေါ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနီရောင် နောက်ခံမှာ အဖြူရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ “ကျောင်းသားတပ်မတော်” အမည် စာတန်းကို ယူနီဖောင်း အင်္ကျီရဲ့ လက်ဝဲဘက် အိတ်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ပါတယ်။ ABSDF စာတန်းနဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံပါတဲ့ လက်မောင်း တံဆိပ်ကို လက်ဝဲပခုံးမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး တပ်ရင်းနံပါတ်နဲ့ ဓား၊ လှံပုံပါတဲ့ တံဆိပ်ကိုတော့ လက်ယာပခုံးမှာ တပ်ဆင်ထားတာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓားနဲ့လှံရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ လက်နက်ကိုင် အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်ပြီး ဓား ဓားချင်း လှံ လှံချင်း ပြန်တော်လှန်မှရမယ်။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းကနေ ကျောင်းသားတွေကို ဓား ဓားချင်း လှံ လှံချင်းချေမှုန်းမှ ရမယ်ဆိုပြီး စိမ်ခေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ဒီတံဆိပ်ကို သုံးတာလို့ သိရပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ညီလာခံကျင်းပတဲ့ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့နေရာကို ကျနော် ရောက်ဖူးချင်နေတာကြာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ရောက်ဖူး တာကတော့ ၁၉၈၉ ဇန်န၀ါရီလ နှောင်းပိုင်းမှလို့ အမှတ်ရနေပါတယ်။
ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကလက်ဒေးစခန်းကနေ မဲဆောက်ဘက်ဆီ ကျနော်တို့ ရုံးရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ကော့မူးရာစခန်းက ကျောင်းသား စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲတခုဆီ ဗိုလ်မှူးစိုးစိုးတို့အဖွဲ့နဲ့ အတူသွားဖြစ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ကော့မူးရာစခန်း ဘောလုံးကွင်းထဲ ကျနော်ရောက်သွားချိန်မှာ စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာက သတင်းထောက်တွေ၊ ကင်မရာသမား တွေကို အတော်များများ တွေ့ရပြီး သင်တန်းဆရာတွေထဲမှာလည်း KNU အပြင် အနောက်တိုင်း လူဖြူကွန်မန်ဒို တဦး နှစ်ဦးကိုပါ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကားကြုံနဲ့လိုက်သွားတဲ့အတွက် အချိန်သိပ်မရလိုက်။ စခန်းတာဝန် ရှိသူတွေနဲ့ ခဏစကားပြောပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ကော့မူးရာဆီ ဒုတိယအခေါက် ကျနော်ရောက်တော့ ဖေဖော်ဝါရီနှောင်းပိုင်း အရေးပေါ်ညီလာခံ အပြီးမှာလို့ ထင်ပါတယ်။ ၁၅ ဘတ်တန် လိုင်းကားအနီကို မဲဆောက်ကနေ ၀မ်ခအထိ စီးသွားပြီး ၀မ်ခ ဈေးတန်းနောက်ကျောဘက်ကနေကော့မူးရာ စခန်းဆီ သွယ်တန်း ထားတဲ့ သစ်တိုသစ်စ လက်လုပ်တံတားပေါ်ကနေ သောင်ရင်းမြစ်ကို ဖြတ်သွားရပါတယ်။ KNU စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ထူးထူးခြားခြား ကျနော်တွေ့မိတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတခုကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ့ရင်ပြင်းထန်စွာ အရေး ယူမယ်လို့ အနီရောင် နောက်ခံ သွပ်ပြားဆိုင်းဘုတ်မှာ အဖြူ ရောင်စာလုံးကြီးကြီးနဲ့ သတိပေးထားတာပါ။ KNU စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကနေ ကျနော်တို့ ABSDF နယ်မြေရုံးရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်း ဘေး က နေအိမ်ဆီအသွား လမ်းတလျှောက်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အချိုရည်ဆိုင်၊ ဗီဒီယိုရုံနဲ့ လူနေတဲအိမ်တချို့ကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အိမ်ကတော့ ကျွန်းသစ်အကြမ်းထည်နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ နှစ်ထပ် အိမ်လေးဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ မနေခင် ဘယ် သူ တွေနေသွားလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ မမှတ် မိတော့။
ကျနော်တို့ရုံးရှေ့မှာ ခန့်ညားထည်ဝါလှတဲ့ ကော့မူးရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးကိုမြင်တော့ KNU မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ ရှိ သားပဲ၊ ငါတို့ မင်းသမီးဒေသမှာ ဘာကြောင့်များ ဘုန်းကြီးကျောင်း မရှိတာပါလိ့မ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အစွန် မှာတော့ နောက်ထပ်အဆောင်တခုကို တွေ့ရပြီး အဲဒီမှာ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ရဟန်းပျိုအဖွဲ့က သံဃာတော် ၂ ပါးနဲ့ ကျောင်းသားတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ရေကို သောင်ရင်းမြစ်အတွင်း သွားခပ်ရပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။
အဲဒီလမ်းမှာ ကျနော်တို့နဲ့ အဓိက ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ KNU ၁၀၁ မှ ဗိုလ်လှဝေရဲ့ အိမ်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဘားတိုက်တခုမှာတော့ ၂၁၁ တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဘားတိုက်ဟာ ကျောင်းသားအင်အား ၁၃၀ ခန့်ထဲက ဘား အံဘက်ကလာတဲ့ ကျောင်းသား ၆၀ ခန့် အတွက်ဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဦးယုနွယ်၊ ဦးရီထွန်း၊ ဦးစိုးထွတ် (အခုအထိ ABSDF ဗဟိုမှာ တာဝန် ထမ်းဆဲ) နဲ့ ဒေါက်တာ မြင့်ချို (နောက်ပိုင်း ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး ၁၊ အခု သြစတြေးလျ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ) တို့ကို ကျ နော်မှတ်မိနေပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ပြန်သိရတာကတော့ ဒီအဖွဲ့တွေဟာ အယင်က ကလက်ဒေးစခန်းကဖြစ်ပြီး KNU အထူးတပ်ရင်း ၁၀၁ မှာ မွမ်းမံ စစ်သင် တန်း တက်ဖို့ လာရင်းနဲ့ ကော့မူးရာအခြေစိုက် တပ်ရင်းဖြစ်သွားတာလို့ ဒီဆောင်းပါးရေးဖို့ မေးမြန်းစဉ် ဒေါက်တာမြင့်ချိုက ကျနော့်ကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တခြား ဘားတိုက် ၂ ခုမှာ ရောက်နေသူတွေကတော့ သီဘောဘိုး စခန်းကနေ စစ်သင်တန်းတက်ဖို့ ရောက်လာသူ တွေဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တခြား နယ်ပေါင်းစုံက ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ဘားတိုက်နံပါတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုအထိ ကျနော်မျက်စိထဲ မြင်နေတဲ့ ထူးခြားချက်တခုကတော့ ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော်အတွက် ထမင်းချက်တဲ့မိုးပြဲဒယ်အိုးကို ကျနော်တို့ မောင်တော်စခန်းမှာလို အုတ်တွေ၊ ကျောက်တုံးတွေပေါ် တည်ထားတာမဟုတ်ဘဲ လက် နက် ကြီး ကျဉ်ဆံအခွန် ၃ ခုနဲ့ထောက်ပြီး တည်ထားတဲ့မြင်ကွင်းပါ။ ၅၇ မမ လောင်ချာ ကျည်ဆံအခွံလို့ ယူဆရပြီး အမြင့် တပေခွဲ၊ အချင်း ၃ လက်မလောက်ရှိပါတယ်။ ဘေးပတ်လည်မှာ အပေါက် သေးသေးလေးတွေပါပြီး အဲဒီကျည်ခွံရဲ့ ထိပ်ဖူးဘက်ကို မြေထဲစိုက်၊ မောင်းတံရိုက်တဲ့ ဖင်ပိုင်းကို အပေါ်ထောင်ကာ အဲဒီအပေါ် မိုးပြဲဒယ် ထမင်းအိုးကြီး တည်ထားတဲ့ပုံကို အခုအထိ ကျနော် မြင်ယောင် နေဆဲဖြစ် ပါတယ်။ နောက်တခါ မီးထိုးထားတဲ့ ထင်းတွေကိုလဲ ကြည့်ပါဦး။ အားလုံးကျွန်းသစ်တွေ။ သစ်စက်က ထွက်လာတဲ့ သစ်တိုသစ်စတွေနဲ့ ကျွန်းသစ် အကိုင်းအခက်တွေ။ ကျွန်းပင်ဆိုတာ ရွှေထက်ရှားတဲ့ ပစ္စည်းတခုလိုလို ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာသာ သင်ခဲ့၊ စာအုပ်ထဲမှာသာ မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော့်အဖို့တော့ ကျွန်းသစ်ထင်းနဲ့ ထမင်းချက်နေတဲ့မြင်ကွင်းဟာ တကယ့်ကို အထူးအဆန်းပါပဲ။
ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ၈၉ သင်္ကြန်ကို ကော့မူးရာမှာနွှဲလိုက်ရပြီး အဲဒီအချိန်အထိ ကော့မူးရာကနေ ရေကျော်စခန်းအထိ KNU ကားတွေသွားလာနေဆဲ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း KNU ကားကြုံနဲ့တခေါက် ရေကျော်ကနေ ကော့မူးရာကို ၀င်ဖူးပါတယ်။ ရေကျော် စခန်းဟာ တပ်မဟာ ၇ အောက်မှာရှိပြီး ဗိုလ်ဂျော်ဖြူ၊ ဗိုလ်ဂျော်နီတို့ အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ကော့မူးရာကတော့ KNU ဗဟိုရဲ့ အထူးတပ်ရင်း ၁၀၁ နေရာဖြစ်ပြီး တပ်ရင်းမှူးက ဗိုလ်မှူးကြီး တောလှ၊ ဒု တပ်ရင်းမှူးက ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူး တောလှရဲ့နေအိမ်ဟာ ကျွန်းပင်တွေကြားမှာ တည်ရှိပြီး ကျနော်တို့ရုံးရှိရာ ဘောလုံးကွင်းနားကနေ မိနစ် ၂၀ နာရီဝက်နီးပါး လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။ KNU တပ်ရင်းရုံးနဲ့ တခြား စစ်ဖက် အဆောက်ဦတွေကိုလည်း သူအိမ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တခါ ထူးထူးခြားခြား ဘရင်းကယ်ရီယာ အဟောင်းတစီးကိုလည်း ဗိုလ်မှူး တောလှ အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ဂိုဒေါင် ထဲမှာ အသေချာ သိမ်းထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကောမူးရာမှာ တပတ်၊ ၁၀ ရက်လောက် နေပြီးတော့ တခြား တာဝန် တခု အတွက် ကျနော်ဟာ မဲဆောက်ရုံးဆီ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ကော့မူးရာစခန်းဆီ တတိယအခေါက် ကျနော်ရောက်တော့ မေလနှောင်းပိုင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ ကော့မူးရာ စစ်မြေပြင်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကျော်နဲ့ ကျနော်တို့ ရုံးအဖွဲ့သားတွေအတွက် ဘာလချောင်ကြော်နဲ့ တခြားစားစရာတွေကို သွားပေးဖို့ မဲဆောက် မြို့ကနေ ၁၅ ဘတ်တန် လိုင်းကားအနီးလေးကိုစီးပြီး ထွက်လာပါတယ်။
မဲဆောက်-မယ့်စရိယန် လမ်းမကြီးကနေ မယ်ပ လမ်းချိုးကိုကျော်၊ ဟွေးခလုတ်ဒုက္ခသည် စခန်းဝန်းကျင်ရောက်တော့ လိုင်းကားက ရပ် လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မဲဆောက်ဘက်ရောက်တဲ့ ၁၉၈၈ ကတည်းက ဟွေးခလုတ်ဒုက္ခသည် စခန်းကြီးရှိနေတာကို တွေ့ရပြီး ဒုက္ခ သည် ၅ ထောင်လောက်ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခင်းအကျင်းကတော့ အခု နိုဖိုးစခန်းနဲ့ တူပါတယ်။
“ရှေ့ဆက်သွားဖို့ မလွယ်ဘူး။ ထိုင်းဘက်ကမ်းထဲအထိ လက်နက်ကြီးတွေကျနေတယ်” လို့ ကားသမားက ထိုင်းတ၀က် ဗမာတ၀က်နဲ့ ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ခရီးသည်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲသံတွေကို ကြားနေရပါတယ်။ သွားလို့ရသလောက် ဆက်သွားပေးဖို့ ကားသမားကိုပြောတဲ့ အခါမှာတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းရှေ့က ရွာအထိ မောင်းလာပြီး အဲဒီအရောက်မှာ ထိုင်း စစ်တပ်က ကားလမ်းကိုပိတ်၊ ၁၀၅ မမ အဝေးပစ် အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ န၀တ တောင်ကုန်းဘက်ကို သတိပေး ပစ်ခတ်ဖို့ ပြင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ။ အဲဒီကာလက အခုခေတ်လို မုန်းဘိုင်းဖုန်းကလည်း မတွင်ကျယ်သေး၊ လမ်း ဘေး ဖုန်းကလည်း မရှိသေးတဲ့အတွက် မဲဆောက်ရုံးကို ဘယ်လိုမှ ပြန်ဆက်သွယ်လို့မရ။ ကော့မူးရာစခန်းတွင်းရှိ ကိုကျော်ကျော် တို့ဆီ ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင် မလားဆိုပြီး နည်းလမ်း ရှာကြည့် ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့ ပါဘူး။
အဲဒီလို ရှေ့ဆက်ရမလား၊ နောက်ဆုတ်ရမလား စဉ်းစားမရဖြစ်နေချိန်မှာ ကော့မူးရာစခန်းမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ဖူးတဲ့၊ ကျနော်တို့ ကျိုးဖိုးတွေနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ အမိုး (ဒေါ်ရွှေလို့ ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်) တို့မိသားစုကို အနီးနားက အိမ်တလုံးပေါ်မှာ ကျနော်တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ အမိုးကို အကူအညီတောင်းကြည့်တော့ “ဒီလောက် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုသွားမလဲ။ ဒီည ဒီမှာအိပ်ပြီး မနက်ဖြန်မှ အခြေနေ ကြည့်ကြည့်ပေါ့” လို့ အကြံပေးပါတယ်။
ကျနော်ကလည်း မရဘူး၊ ဟိုမှာ ကျနော့်လူတွေ စောင့်နေတယ်။ သွားလို့ရရင် ဒီညနေ သွားချင်တယ်ဆိုတော့ အနီးနားရှိ အရပ်ဝတ် KNU အရာရှိတဦးနဲ့ ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ “မင်း ကရင်လို ပြောတတ်လား” ဆိုပြီး အဲဒီအရာရှိက မေးရင်းနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ID တွေကို စစ်။ ဟိုမေး ဒီမေးလုပ်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ကရင်စကားကို ၀ါလဲဂေး၊ ဟာလဲဂေးထက် ပိုမပြောတတ်သေး။ ဒီတော့ ထိုင်းလိုရော ပြောတတ်လားလို့ သူက ဆက်မေးပါတယ်။ ထိုင်းစကားကိုလည်း စ၀ါဒီခပ်၊ စဘိုင်ဒီမိုင်ထက် ပိုမပြောတတ်သေးတဲ့ခါမှာတော့ သူကျ နော်ကို အတော်စိတ်ပျက်သွားပုံ ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ “မင်းဘာစကားမှ မပြောဘဲ ငါတို့နောက်သာလိုက်ခဲ့။ တိုက်ပွဲအရှိန်နည်းနည်း လျော့ရင် သွားမယ်” လို့ KNU အရာ ရှိက ကျနော်ကို ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အမိုးတို့တည်းနေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာ ခဏနား၊ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက လိုအပ် သ လောက် ကိုပဲ ခွဲယူ၊ စစ်မြေပြင်ဆီသွားဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ရပါတယ်။ အဆင်သင့်ပြင်တယ်ဆိုလို့ ကျနော်မှာ ကျောပိုးအိတ်တောင် မပါဘူး။ ဘာလချောင်ကြော်နဲ့ တခြား အကြော်အလှော်တွေ ထည့်လာတဲ့ ပလစတစ်အိတ်တလုံးနဲ့ အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုမျှသာ။ ညနေ ၄ နာရီ ကျော်ကျော်မှာတော့ တိုက်ပွဲအရှိန် နည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကို စတင်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,31st,2011
( 25 )Despite thaw, Burmese still dying in war zone
( 24 )What will happen in 2012 Burma politics?
( 23 )Burma byelection set for April to contest 48 parliamentary seats
( 22 )As in Africa and Asia, Toyota trucks will sell first in Burma
( 21 )Burmese Troops Overrun Kachin Base
( 20 )War and Peace in Eastern Burma
( 19 )Burma Comes In From the Cold
( 18 )လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက် မမှန်ကန်ဟု ဦးဝင်းတင်ဝေဖန်
( 17 )Burmese watch increased interest in homeland
( 16 )ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီလမှာ ကျင်းပမယ်
( 15 )Burma's human rights commission denies prison mistreatment
( 14 )AI စွဲချက်ကို အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ငြင်း
( 13 )Rights group urges Burma amnesty
( 12 )ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ
( 11 )11 Burmese journalists imprisoned in 2011
( 10 )တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး စုပေါင်းကြိုးပမ်းကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
(9)Burmese are newest immigrants to settle in Dubuque Archdiocese
( 8 )တိုင်းရင်းသားပညာရေး NLD ဂီတပွဲ စည်ကား
(7)Burma rights body says inmate abuse claim 'untrue'
(6)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ဆုံ
(5)Wrestling helps Burmese refugee transition to life in Syracuse
(4)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုးရော့စ် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက် တွေ့မည်
(3)Will 'supreme leader' Kim Jong-un takeashot on North Korea's future?
(2)နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ဖို့ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အရာရှိတစ်ဦး ပြော
( 1 )Burmese man celebrates first Christmas in America
ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့မည်
လင်းသန့် on December 30, 2011
မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန် ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
“မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့ လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာပါ။ နေအိမ်မှာပဲ တွေ့ပါမယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အနီးကပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူ ဦးခွန်သာမြင့်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တခြား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံရန်မရှိဟု သိထားကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မည်သည့်ကိစ္စများ ဆွေးနွေးမည်ကိုမူ မသိရကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်သည် သား ၂ ဦးနှင့်အတူ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်လာလ ၂၆ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၈ ရက်ကြာခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း အင်းလေးသို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်သည် မြန်မာအစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရှိရသော်လည်း အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား အသက် ၈၁ နှစ်ရှိ မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အခြေစိုက် Open Society Institute (OSI) အဖွဲ့ကြီးကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့ကြီးက အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိက တိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်တွင် ရုံးခွဲများထားရှိကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀၀ ကျော် ကူညီပြီးဖြစ်ကြောင်း OSI အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
OSI သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများကိုလည်း နှစ်စဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းနှင့်ချီ၍ ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ OSI ဖောင်ဒေးရှင်း၏ Burma Project/ Southeast Asia Initiative က မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတို့အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။
မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်သည် စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း အာဆီယံခေါင်းဆောင်များကို သတိပေးခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အာရှ စီးပွားရေးပျက်ကပ်သည် မြန်မာကို အာဆီယံဝင်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့် ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်က ငွေကြေးကစားပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။
မကြာသေးမီက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးနောက် မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်ကို မြန်မာအစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့်လက္ခဏာဟု မှတ်ယူနိုင်ကြောင်း၊ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေကို လာရောက်လေ့လာခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတချို့က သုံးသပ်သည်။
“သူရဲ့ OSI ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်နေရုံတင်မကဘူး သူကိုယ်တိုင်က ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ပြီးတဲ့နောက်မှာ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့မှ ကိုဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်က ဆက်လက် ကူညီသွားမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။
မစ္စတာ ဆိုရော့စ်သည် မြန်မာအပါအ၀င် အာဏာရှင်နိုင်ငံများနှင့်ပတ်သက်၍ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီး စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
Soros Fund Management လုပ်ငန်း ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ဂျော့ဂ်ျ ဆိုရော့စ်ကို ငွေကြေးကစားသူ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ လူမှုရေး အလှူရှင်၊ အစိုးရ အကြံပေးဟူ၍ လူသိများသည်။
ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရင်း ဘီလျံနာ ဖြစ်လာသူ မစ္စတာ ဆိုရော့စ်သည် သူ၏ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့အတွက် လှူဒါန်းမှုများတွင် အဓိက အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေသည့်နိုင်ငံများ၊ အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူများဘက်မှ အကူအညီ ပေးလေ့ရှိသည်။
၂၀၁၀-၁၁ အတွင်း မြန်မာမှ US$ ၁၇၅ သန်းကျော် ကုန်ပစ္စည်း ဘင်္ဂလာသို့ တင်ပို့ခဲ့
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသို့ မြန်မာမှ ကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၅ သန်းကျော်ဖိုး တင်သွင်းခဲ့သည်ဟု FBCCI က ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသည်။
Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) က ထုတ်ပြန်သော စာရင်းဇယားအရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ နှစ် သွင်းကုန် ပမာဏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၅ ဒဿမ ၇၂ သန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ မြန်မာသို့ တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်း ပမာဏမှ အလွန်နည်းပါးပြီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဒဿမ ၆၅ ရှိသည်ဟု FBCCCI က ပြောသည်။
မြန်မာမှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ အဓိက တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ဆန်၊ သစ် အမျိုးမျိုး၊ ရေချိုငါး အမျိုးမျိုးနှင့် ပဲအမျိုးစုံတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ မြန်မာသို့ တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ဘိလပ်မြေ၊ အိမ်သုံး ဆေးဝါးများ၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ် ၀ါယာကြိုးများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးကို တိုးမြင့်ရန် နှစ်ဘက် ကုန်သည်ကြီးများက ကြိုးစားနေသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ အကြားတွင် ကန့်သတ်မူများ ရှိနေသဖြင့် မအောင်မြင်ဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အကြားတွင် ဆက်သွယ်ရေး စနစ် မကောင်းမွန်သည့် အပြင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရာတွင် ဘဏ်စနစ်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာ စံနုန်းများနှင့် အညီ မပြုလုပ်နိုင်သေးခြင်းကလည်း အခက်အခဲ တစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်ရန် အတွက် တိုက်ရိုက် လေကြောင်းလိုင်း ပျံသန်းရေး၊ ရထားလမ်း ကားလမ်း ဖေါက်လုပ်ရေးမှာ အဓိကနေရာက ရှိနေကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်လာပါက ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်မှ တင်ပို့ကုန် ပမာဏ များလာမည် ဖြစ်ကြောင်း BMCCI ( Bangladesh- Myanmar Chamber of Commerce and Industry) ဒုဥက္ကဌ SM နုရ် ဟော့ခ်က ပြောသည်။
မုတ္တမ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဝယ်ခွင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTTEP ထပ်ရ
နေပြည်တော်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ တွင် ပဏာမ ဆွေးနွေး ခဲ့သည့် မုတ္တမ ပင်လယ်မှ ထပ်မံ တွေ့ရှိသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ များကို ဝယ်ယူ တင်သွင်းရန် ထိုင်း နိုင်ငံက မြန်မာနှင့် လာမည့် နှစ်ဆန်းတွင် စာချုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆူရာဖုံ တိုဝိကျတ် ချိုင်းကွန် က ပြောသည်။
မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ရှိ လုပ်ကွက် M3 မှ ထွက်သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဝယ်ယူတင်သွင်းရန် ၂ဝ၁၂ ခု ဇန်နဝါရီ ၅-၆ ရက်တွင် စာချုပ် မည်ဟု ထိုင်း နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားလာတယ်။ ထိုင်း စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ PTTEP က လက်မှတ်ထိုး ရမှာ ပါ” ဟု မစ္စတာဆူရာဖုံ ပြောကြားကြောင်း အင်္ဂါနေ့ထုတ် The Nation က ဖော်ပြသည်။
နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများ လေးကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးရက် အတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်က မြန်မာ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးတို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၊ ထိုင်းစွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဖီချိုင်း နာရစ်ဖ ထာဖန်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် PTTEP က ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ကုန်းတွင်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်သစ် ၁၈ ကွက်မှ နှစ်ကွက်ကိုလည်း ရှာဖွေရေးလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး က အတည်ပြုခဲ့သည်ဟု ထိုင်းစွမ်းအင်ဝန်ကြီးက တရုတ်နိုင်ငံ ဆင်ဟွာ သတင်း ဌာနကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ကွက်အမှတ် M-3 တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရန် စမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝလုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ PTTEP တို့ ၂ဝဝ၄ ခု သြဂုတ်လ တွင် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။
ယင်းလုပ်ကွက်အတွင်း ရှာဖွေရေးတွင်းအမှတ် အောင်သိင်္ခ-၂ မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တနေ့လျင် ကုဗပေ ၂၅.၈ သန်းနှင့် ရေနံစိမ်း ၁၅၄ စည် ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂ဝ၁၁ မေလက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အောင်သိင်္ခ-၂ မှ ထွက်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလျံ ကုန်ကျခံ တည်ဆောက်မည့် ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပါ ထားဝယ်-ကန်ချနဘူရီ အဝေးပြေးလမ်း တလျှောက် ပိုက်လိုင်း များဖြင့် ထိုင်းနိုင်သို့ တင်သွင်းဖွယ်ရှိသည်။
ထိုင်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ PTTEP က မုတ္တမပင်လယ်ထဲတွင် ရတနာနှင့် ရဲတံခွန် စီမံကိန်းများမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်သွင်းနေသည်မှာ ၁ဝ နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လုပ်ကွက်အမှတ် M-9၊ M-11၊ M-7 တို့တွင်လည်း ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ ၈ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီ ၁ ရက် ကျင်းပမည်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက် ပွဲကို လာမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှာ ပြုလုပ်မှာ​ ​ဖြစ်​ပြီး​ နေပြည်တော် ကော်မရှင်က ပြည်နယ်တိုင်း ဒေသ ကြီး ကော်မရှင်ရုံး တွေထံ စာပို့ အကြောင်းကြား လိုက်တယ်လို့ အမည် မဖော်လိုတဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင် လူကြီး တဦးက ပြောပါ တယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် ညပိုင်းမှာ အစိုးရ သတင်း ဌာနတွေက သတင်း ထုတ်ပြန်ဖွယ် ရှိတယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကိုယ်စား လှယ် လောင်း အမည် စာရင်းကို ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံး ထားပြီး ကော်မရှင်ကို ပေးပို့ ရမယ်လို့ အဲဒီ ကော်မရှင်လူကြီးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မီးဘေးသင့်သူများထံ သွားရောက်
ဧရာဝတီ on December 30, 2011
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သည် ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့် မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်မှ မီးဘေး ဒုက္ခသည် များရှိရာ မဟာဝိဇယ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတိုက် သို့ သွားရောက်၍ အားပေး ကူညီသည်။
ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် အထက ၇ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နှင့် မဟာဝိဇယ ကျောင်း အပါအ၀င် အုပ်စုများခွဲထားရာ ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ခန့်ရှိသည့် မဟာဝိဇယ ကျောင်းတိုက်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာရောက်အားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မီးဘေးသင့်တဲ့သူတွေကို အဓိက အားပေးစကားပြောတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့၊ အားလုံးဝိုင်းပြီး ကူညီ မယ်ဆိုတာလည်း ပြောတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် NLDကလည်း ကူညီမယ်ဆိုတာလည်း ပြောတယ်”ဟု ၎င်းက ပြော ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ဒုက္ခသည်များက ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း
ဒုက္ခ သည်များကို တဦးချင်းစီ လိုက်လံအားပေးခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
မီးဘေး ဒုက္ခသည်တဦး က“အဆိုးထဲက အကောင်း။ အမေစုလာအားပေးတာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်။ ကျနော်တို့ကို အမေစု ပစ် မထားတာသိရတာ ၀မ်း သာ တယ်။ အားလုံးကလည်း အရမ်းကူညီကြတယ်။ ပြည်သူတွေရော၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက ကူညီကြ တယ်”ဟု ပြောသည်။
မီးဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် NLD က ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ဆောင်ပေး လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
မီးဘေး ဒုက္ခသည် အများ စုက စားနပ် ရိက္ခာ၊ အ၀တ် အထည်နှင့် အကူအညီ များစွာ ရရှိ သော်လည်း နေအိမ်များ ပြန်လည် တည် ဆောက် ရေးနှင့် မူလ နေရာတွင် ပြန်လည် နေရာ ချထား ပေး၊ မပေး စောင့်ဆိုင်း နေကြကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် အများစုမှာ မူလ နေ အိမ် များကို ပြန်လည် ပြုပြင် ဆောက်လုပ် နေလိုကြ ကြောင်း ဒုက္ခသည် များက ပြောဆိုသည်။
“ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ခဲတွေ၊ ကွန်ကရစ်တွေလွင့်ပြီး အိမ်တွေက ပြိုကုန်တာ။ တချို့အိမ်တွေလည်း မီးလောင် ကုန်တယ်။ အားလုံးက မူလနေအိမ်လေးတွေမှာပဲ ပြန်နေချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရဘက်က ဘယ်လို လုပ်ပေးမလဲမသိဘူး။ နေရာရွှေ့ခိုင်းပြီး၊ မြို့စွန် ဘက်မှာ နေရာပြန်ပေးမှာလား၊ ဘာလား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးဘူး။ မူလနေရာပြန်မပေးဘဲ သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံး ပိုဒုက္ခရောက်ကြမှာ”ဟု ကူးတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်မှ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် တဦးက ဆိုသည်။
မီးဘေးသင့်သူ အများစုမှာ အိမ်ဂ ရန်ပိုင် မရှိကြ သူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်၂ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် မေတ္တာမွန် ၀င်း ဂိုဒေါင်များ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးသေဆုံးကာ ၉၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ဂိုဒေါင် ၁၆ လုံး၊ အိမ်ခြေ ၂၂၆ လုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး မိသားစုပေါင်း ၂၁၆ စု လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၃၈ ဦး အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကာ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ကျပ် သိန်းတထောင်ကျော်သာ ရှိသည်ဟု ယမန်နေ့က မီးသတ် ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများ၌ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၁၇ ဦး သေဆုံး၍ ၈၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ အိမ်ထောင်စု ၁၄၀ ကို ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ၌ နေရာချထားပေးပြီး လိုအပ် သည်များကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူ များက ကူညီ ပံ့ပိုးပေး ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။
အခုနှစ် ဇွန်လ ကစပြီး​ ​ကေအိုင်​ အေနဲ့​ မြန်မာ အစိုး​ရ ဖြစ်ပွား ​ခဲ့​တဲ့​ တိုက်ပွဲ​တွေ အတွင်း​မှာ ကချင် လွတ်​မြောက်​ရေး​ အဖွဲ့​ (​ကေအိုင်အို) ရဲ့​ တပ်စခန်း​ ၆ ခုကို အစိုး​ရ တပ်​တွေက သိမ်း​ယူခဲ့​ တယ်လို့​ ​ကေအိုင်အိုက ​ပြောပါတယ်။
ကေအိုင်အို​ ပြောခွင့်​ရ ဦး​လနန်း​က “သိမ်း​ပိုက် လိုက်တဲ့​ စခန်း​တွေ က​တော့​ တပ်မဟာ ၄ ဘက်မှာ စခန်း​က ၃ ခု​ လောက်ပါမယ်။ တပ်မဟာ ၃ ဘက်မှာ ၃ ခု​ လောက်ပါမယ်။ အား​လုံး​ ၆ ခု​ လောက်ရှိမယ်။ သူတို့​ ကလည်း​ အဲဒီစခန်း​ တခုကို ဝင်နိုင်ဖို့​ အတွက် အနည်း​ဆုံး​ ၁၀၀ ပတ်ဝန်း​ ကျင်​တော့​ အသက်စွန့်​ ရတယ်ဗျ။”
အခုလ ၂၄ ရက်​နေ့​ ကစပြီး​ ရှမ်း​ပြည်နယ် မိုင်း​တုံမြို့​ မှာရှိတဲ့​ ​ကေအိုင်အို တပ်မဟာ ၄ လက်​အောက်ခံ တပ်ရင်း​ ၈ စခန်း​ကို အစိုး​ရက အင်အား​ ၃၀၀ ​လောက်နဲ့​ ထိုး​စစ် ဆင်တိုက်ခိုက် ခဲ့​တဲ့​ အတွက် ၂၈ ရက်​ နေ့​မှာ ဖယ်​ပေး​ လိုက်ရ တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ကေအိုင်အိုနဲ့​ အစိုး​ရတပ်အကြား​ ဒီဇင်ဘာလဆန်း​ပိုင်း​မှာ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်း​မော်၊​ ဝိုင်း​မော်၊​ မိုး​မောက်နဲ့​ ရှမ်း​ပြည်နယ် မိုင်း​တုံမြို့​နယ်​ဒေသ ​တွေမှာ ​နေ့​စဉ်ဆိုသလို တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား​နေပြီး​ မ​နေ့​တုန်း​ကလည်း​ တိုက်ပွဲ ၇ ခု ဖြစ်ပွား​တယ်လို့​ ​ကေအိုင်အိုက ​ပြောပါတယ်။
အစိုး​ရရဲ့​ ပြည်​ထောင်စုအဆင့်​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အဖွဲ့​က တိုင်း​ရင်း​သား​ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့​တွေနဲ့​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ ​ဆွေး​နွေး​မှု​တွေ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်​နေချိန်မှာ ​ကေအိုင်အိုနဲ့​ တိုက်ပွဲ​တွေ ဖြစ်ပွား​နေတာပါ။
အစိုး​ရ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အဖွဲ့​တွေနဲ့​ ​ကေအိုင်အိုတို့​အကြား​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်း​က တရုတ်နိုင်ငံမှာ ​နောက်ဆုံး​ ​တွေ့​ဆုံခဲ့​ပေမယ့်​ အပစ်ရပ်​ရေး​ အတွက် အ​ဖြေတစုံတရာ မရရှိခဲ့​ပါ။
" ရေတပ်သား နာမည်က သူရ၀င်း၊ ဗမာ အမျိုးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆတ်ရိုးကျ ရွှေမင်းဂံ ရေတပ် စခန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ မမိုးမိုးအိခိုင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ခိုးယူသွားပါတယ်။ အဲသလို ခိုးယူပြီးတဲ့ နောက်မှာ တရားဝင် လက်ထပ်ယူဖို့ ငြင်းပယ်တဲ့ အတွက် အဲဒီ ရေတပ် စခန်းဝင်းထဲက စားသောက်ဆောင်မှာဘဲ တနင်္လာနေ့ ညနေမှာ မမိုးမိုးအိခင် အဆိပ်သောက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
မမိုးမိုးအိခင်အား သူရ၀င်းက ဒီဇင်္ဘာလ ၂၄ ရက် စနေနေ့က ခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်း၊ တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်နေ့လုံး ပျောက်နေပြီး တနင်္လာနေ့ နံနက်တွင် ရွှေမင်းဂံ ရပ်ကွက်ရှိ သူမ အိမ်သို့ ပြန်ရောက် လာခဲ့ကြောင်း၊ မိခင်ဖြစ်သူက ပြစ်တင် ကြိမ်းမောင်းရာမှ မမိုးမိုးအိခင်မှာ ရေတပ်ဝင်းထဲသို့ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးမှ သူမ မိခင် ဖြစ်သူထံသို့ လာရောက်ပြီး မမိုးမိုးအိခင်မှာ ရေတပ် စားသောက်ဆောင်ထဲတွင် လဲနေပြီး အခြေအနေဆိုးရွားနေကြောင်း လာရောက် အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
" မိခင် ဖြစ်သူက လိုက်သွားတဲ့ အခါ ရေတပ်ဝင်းထဲက လူပျို စားဆောင်မှာ မမိုးမိုးအိခင်က ပါးစပ်က အမြုပ်တွေ ထွက်ပြီး သတိလစ်နေတယ်။ ချက်ချင်း ဆေးရုံကို ယူတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေက အရမ်းဆိုးရွားနေပြီ ဖြစ်တယ်။ ဆေးရုံ အရောက်မှာဘဲ အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မမိုးမိုးအိခင်မှာ အိမ်က ရေတပ်ထဲသို့ ပြန်လာပြီး ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ရေတပ်ဝင်းထဲရှိ စားသောက်ဆောင်တွင် အဆိပ်သောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မမိုးမိုး အိခင်မှာ ကုန်တင် ကုန်ချ လုပ်နေသူ သာမန် ရပ်ကွက်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မိဘများမှာလည်း ဆင်းရဲပြီး ကုန်တင် ကုန်ချ လုပ်ကိုင် သူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို​ ​ဖြတ်ကျော်ဝင် ရောက်နေ သော အလွန်အားကောင်းလှတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးရဲ့​ အရှိန်ကြောင့်​ ​မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း​ တလျှောက်နဲ့​ ​မြန်မာ့ ကမ်း လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ မိုးသက်လေပြင်းကျပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် ၆ နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အလွန် အားကောင်း သော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး (THANE) ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း တမီလ်နာဒူးကမ်းခြေကို ချန်နိုင်း (Chennai) မြို့အနီးမှ ဖြတ် ကျော်ဝင်ရောက်နေပြီး ဒီမုန်တိုင်းရဲ့ အရှိန်ကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကြား မိုးရွာနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန် ထားပါ တယ်။
အဲဒီမုန်တိုင်းကြီးဟာ မနေ့မနက်ပိုင်း တိုင်းထွာချက်အရ အ၀ါရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားရာကနေ အလွန်အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်းတိုင်းကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အိန္ဒိယကို ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်နေတာပါ။
ထိုင်း နယ်စပ် မှောင်ခိုလုပ်ငန်း ဆက်လက်ကြီးထွား
ပြည်တော်မြင့် on December 30, 2011
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်-မြ၀တီ တံတား ပြန်ဖွင့်သည်မှာ တလနီးပါးကြာမြင့်ချိန် အထိ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း တမျိုးသာ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ရရှိပြီး တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုဖြင့်လည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေကြကြောင်း မြန်မာ ကုန်သည်များက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြ၀တီမြို့မှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ဘက်သို့ ငါး၊ ပုစွန် ၊ ကဏန်း စသည့် မြန်မာ ရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် တရားဝင်နှင့် တရားမ၀င်သည့် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးစလုံး ကုန်သွယ်မှု ပြုနေကြရသည်ဟု မြန်မာ ရေချိုပုစွန်ထုပ် ကုန်သည် တဦးက ပြောဆိုသည်။
“ဒီလဆန်း ၅ ရက်နေ့ မြန်မာဘက်က တံတားပြန်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ မကြာဘူး ငါး၊ ပုစွန်၊ ကဏန်းတွေကို ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်ကနေ ထိုင်းဘက်ကို ပို့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကုန်သည်တွေကတော့ အကျိုးအမြတ်ပိုရတဲ့ တရားမ၀င်နည်းနဲ့ တွဲပြီးလုပ်နေကြရ တယ်၊ တရားဝင်ကြီးပဲ ဆိုရင်တော့ အကျိုးအမြတ်က နည်းတယ်၊ ရထားတဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စဉ်လေးအတွက် ထိန်းပြီးလုပ်နေ ရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာရေထွက် ပစ္စည်းများ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ တရားဝင် တင်ပို့သူများမှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တဆင့် အခွန်ဆောင်၍ ပို့ကြရ ကြောင်း၊ တချို့မှာ ရန်ကုန်တွင်အခွန်ပေးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မှတဆင့် မြ၀တီ သို့ မျှောစာများဖြင့်သယ်၍ တင်ပို့သည်များလည်း ရှိ ကြောင်း၊ တရားမ၀င် တင်ပို့သူများမှာ အခွန်ဆောင်စရာမလိုသည့်အတွက် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ ပုစွန်ပို့ကုန် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ကိုအောင်က ပုစွန်ထုပ်ဆိုက်ကြီး ၃-၄ အမျိုးအစားကို ထိုင်း နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ပါက ယခင်က တကီလို လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀.၄၅၅ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်နှုန်းနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန သို့ အခွန် ပေးဆောင် ရသည်ဟု ပြောပြသည်။
“အခု မြ၀တီတံတား ပြန်ဖွင့်ချိန်ကစပြီး သတ်မှတ်ချက် ပုစွန် တကီလိုရဲ့၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပေးရတော့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပုစွန် တကီလို ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၂၀၉၁ ပဲ ပေးဆောင်ရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ လဆန်း ၁၀ ရက်ခန့်ကစ၍ မြန်မာ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို မဲဆောက်ဘက်သို့ တရားဝင် တင်ပို့သည့် ပမာဏမှာ တရက်ခြား ၁၅ တန် ခန့်ရှိကြောင်း၊ တရားမ၀င်နည်းဖြင့် ချစ်ကြည်ရေးတံတားဘေး ၀ဲယာရှိ လှေဆိပ်များမှတဆင့် တင်ပို့မှု မှာ တရက်ခြား ၁၀ တန်ခန့်ရှိကြောင်း မြန်မာ ရေချိုပုစွန်ထုပ် ကုန်သည်က ပြောပြသည်။ ပုစွန် တတန်လျှင် ကီလို ၁၀၀၀ အလေးချိန် ရှိသည်။
မဲဆောက်ရှိ မြန်မာ ရေထွက်ပစ္စည်း လက်ကားဖြန့်ချိသည့် ထိုင်းပွဲရုံပိုင်ရှင် နိုင်ပေါရမ်းချိုင်း ကလည်း အဆိုပါနည်းလမ်း ၂ မျိုး စလုံးဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့သည်မှာ ၁၅ နှစ်နီးပါး ရှိပြီဟု ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်က ကုန်သည်တွေအတွက် တိကျတဲ့အာမခံချက်မရှိဘူး၊ ကုန်သည်တွေလည်း အခွင့် အရေး ရခိုက် လုပ်နေရတဲ့ အခြေအနေ၊ အခုတက်တဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ပြောင်းလဲသွားမယ် ဆိုရင်တော့၊ ကုန်သည်တွေရဲ့ဘ၀ တိုးတက်လာမှာဖြစ်သလို မသမာမှုနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့နည်းလည်း အလိုအလျောက် ပျောက်သွားမှာဖြစ် တယ်၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ အရင်ကလိုပဲ ထိုင်းဘက်က အသာစီး ရနေဦးမှာဖြစ်တယ်”ဟု လည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိုင်းနှင့် မြန်မာ တရားဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုပ်သူများသည် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင် လုပ်ရကြောင်း၊ ယင်း လိုင်စင် ရရှိရန်မှာ နှစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဟု မြန်မာအာဏာပိုင်များက ပြောဆိုသော်လည်း တံတားပြန်ဖွင့်ပြီးသည့်ရက်မှ ယနေ့အထိ လိုင်စင် မရကြ သေးကြောင်း ကုန်သည်များက ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ မဲဆောက်-မြ၀တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တွင် မြန်မာဘက်မှ ရေထွက်ကုန်အပါအ၀င် လယ်ယာထွက်ကုန်၊ သစ်တော ထွက်ကုန် နှင့် ချည်ထည်အမျိုးမျိုးကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် နားလည်မှုယူကာ တရားမ၀င်တင်ပို့လျက် ရှိသည်။
ထိုင်းစားသောက်ကုန်များကို ယနေ့အထိ မြန်မာဘက် တရားဝင်တင်သွင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ကန့်သတ်ထားသည့် ထိုင်းစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ၁၅ မျိုးကိုလည်း နေ့စဉ်ခိုးသွင်းကာ ပြည်တွင်းဈေးကွက် အသီးသီးသို့ မြ၀တီ မှတဆင့် တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပိတ်ပင်ထားသည့် ထိုင်းစားသောက်ကုန် ၁၅ မျိုးအနက် ၅ မျိုးကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက အကန့်အ သတ်ဖြင့် ယခုလ ၉ ရက်နေ့က စတင်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာကုန်သည်များ လုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း ကြေညာထားသော်လည်း စိတ်ဝင်စားသူ နည်းပါးနေသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ ကုန်သည်ကြီး ဦးယူနွတ်ဘိုင် က ပြောသည်။
“လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရင် အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ FDA ရဲ့ထောက်ခံချက်ယူရမယ်၊ ပြီးရင်အခြား ကန့်သတ် ချက် အ ဆင့် တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့၊ အခုလိုပဲ မဲဆောက်ကနေ စိတ်ကြိုက် ထိုင်းပစ္စည်းတွေကို နား လည် မှုနဲ့တင်သွင်းတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်၊ ဒီနည်းကို မြန်မာကုန်သည်တွေ လုပ်လာတာ ၁၅ နှစ်ကျော်ပြီ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာဘက်မှ အကန့်အသတ်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် ထိုင်းစားသောက်ကုန် ၅ မျိုးမှာ အချို မှုန့်၊ အချိုရည်၊ ဘီစကစ် မျိုးစုံ၊ စည်သွတ် ဘူး မျိုးစုံနှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များ ဖြစ်သည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေး ဖွင့်လှစ်ထားစဉ်ကာလအတွင်း ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ မြန်မာဘက်တင်ပို့သည့် ပမာဏမှာ တလလျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ သန်း ၃၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ထိုင်းကုန်သည်ကြီးများ အသင်း၏ စာရင်းများအရ သိရှိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးပမာဏမှာ ပို့ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၉.၂၂၁ သန်းဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃၅.၄၂၈ သန်းဖြစ်သည်ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်း ၀ယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာအစိုးရက လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ယမန်နှစ်ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဒုတိယ အကြီးဆုံး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဖြစ်သည့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဂိတ် မဲဆောက်-မြ၀တီ ချစ်ကြည်ရေး တံတားကို တနှစ်ခွဲနီးပါး ပိတ်ထားခဲ့ ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
တံတားဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့်အတွက် ဒေသအတွင်း တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုများ လျှော့နည်းသွားစေ မည်ဟု ပြောခဲ့ သော် လည်း လက်ရှိတွင် မြန်မာနှင့်ထိုင်း နှစ်ဘက်ကုန်သည်များ တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှု အပြန်အလှန်ပြုလုပ်နေသည့် ပမာဏမှာ တံတားပိတ် ထားသည့် ကာလထက် ပိုများသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့ နာရီစင်ကွင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရရှိသော သဘာဝ ဓါတ်ငွေကို ခွဲဝေ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေး အတွက် တောင်းဆိုမည့် လူထု စည်းဝေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းစဉ် နိရဉ္စရာကို ထိုသို့ သူ့အမြင် ကို ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
" ကိုလိုနီခေတ်ကလို ဂုတ်သွေးစုပ်တာမျိုး၊ ဒေသ တစ်ခုက ထွက်တဲ့ ရှိရှိသမျှ သယံဇာတအားလုံးကို သိမ်းကျုံး ယူငင်သွားပြီး တခြား ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် လုပ်သွားတာမျိုး၊ အဲဒီ ဒေသမှာရှိတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတပစ္စည်းကို စုပ်ပြီး တခြားဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ယူသွားတာမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မှန်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု သွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ ချစ်ကြည်မှုဟာ အလှမ်းဝေး ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ရခိုင်ပြည်သူ လူထုကို ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းကို တင်ပေးစေချင် ( ဒီစီမံကိန်းကို ဖျက်ဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူး) ဒီစီမံကိန်းက ရတဲ့ အကျိုး အမြတ်အပေါ်မှာ ရခိုင်ပြည် သူလည်း ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အချိုးအစားကို မျှဝေပေးပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက် တဲ့အခါမှာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် တနံ တလျှားမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ အကုန်လုံးမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းကို ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်"ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ပြောသည်။
၎င်းပြင်သူက "သယံဇာတ တော်တော်များများကို ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ များပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေမှာ ရေကာတာကြီးတွေ ဆောက်မယ်။ အီလက်ထရောနစ် ပါဝါထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပရိုဂျက်ကြီးတွေ လုပ်မယ်။ ရလာတဲ့ ဓါတ်အား တွေကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်နဲက စက်မှုဇုန်တွေ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းကိုဘဲ ယူယူသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မျှော် လင့်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်း ညီညွတ်မှုဟာ အလှမ်းဝေး ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်" ဟု ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့တွင် နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော လလူထု စည်းဝေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း သူက ယခုလို ပြောသည်။
" ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးပမ်း ရာမှာ ရခိုင်ပြည်သူလူထုက ဘယ်လောက်ထိ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု ရှိမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအကိုအရင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြည်နယ် ၇ ပြည် နယ်နဲ့ တိုင်း ၇ တိုင်းပေါ့။ တိုင်း ၇တိုင်းမှာ အများစုနေကြတဲ့ ဗမာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ လည်း ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်း စာ နာမှာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး တဲ့ အခါမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ လူထုဆန္ဒကို ခံယူတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြတဲ့ အခါ မှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ပြည်ထောင်စုကြီး အတွင်းက ရသင့််ရထိုက်တာကို တောင်းဆိုတာ တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်တွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်ထားပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ အမတ်များက အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက် သော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သုံးစွဲရန် ရှိမရှိကို မေးမြန်းရာ လုံလောက်သော အဖြေကို မရရှိခဲ့သဖြင့် လူထု စည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်ပြီး လူထု သဘောထားကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ သိရှိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုလို လူထု စည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
" ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့လွတ်တော်၊ အမျိုးသားလွတ်တော် အမတ်တွေကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက ဒီရွှေဂတ်စ်နဲ့ ပတ် သတ်ပြီး ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ မေးခွန်းတွေ အပေါ်မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီး တွေ ဖြေကြား တဲ့အခါမှာ လုံလောက်တဲ့ အဖြေတွေ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ရှိကြတဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ် ရေအောက် သယံဇာတ တွေအပေါ်မှာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံတော်က သဘောထားတချို့ ပျော့ပျောင်းနိုင်ပါရဲ့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ပေါ့။ အဓိကတော့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ဒေသ တခုခုကထွက်တဲ့ မြေပေါ် မြေအောက် သယံဇာတအပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာ ဘယ်လိုဘဲကန့်သတ်ထားပါစေ ပြည်နယ်တိုင်း ဒေကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစုံတခု အတိုင်းအတာထိ ဒေသခံ တွေအပေါ်မှာ ခွဲဝေပေးရမယ် ရာခိုင် နှုန်း အချိုးစားတခုကို နိုင်ငံတော်ကလည်း အသိမှတ်ပြု စဉ်းစား နိုင် အောင် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်း ချက်လည်း ပါပါ တယ်။ ပါတီမူဝါဒတွေကိုလည်း ပြည်သူကို ချပြနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်လည်း ပါပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ၏ လူထု စည်းဝေးပွဲကို ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ယခု ၂၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ခွင့်ပြု လိုက်ပြီး အဆို စည်းဝေးပွဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီက ၁၁ နာရီထိ ကျောက်ဖြူမြို့ နာရီစင်ကွင်းတွင် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။
စည်းဝေးပွဲသို့ လူပေါင်း ၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခွင့် ပြုထားပြီး ဒေါက်တာ အေးမောင်၊ ကျောက်ဖြူပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးဘရှိန် အပါအ၀င် စုစုပေါင်း လူ (၆) ဦးက ဟောပြေကြမည် ဖြစ်သည်။
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို လှူဒါန်းသူ များပြား
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ဂိုဒေါင်တွေ မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီးဘေးသင့် ပြည်သူတွေကို သွားရောက် လှူဒါန်းသူတွေ အထူးများပြားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ စေတနာရှင်ပြည်သူတွေက သွာရောက် လှူဒါန်းကြပြီး လှူဒါန်းသူတွေဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ အပြည့်ပဲလို့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်က ခုလို ပြောပါတယ်။
“ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှာက လှူတဲ့လူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေက လှူတဲ့လူတွေများတော့ ပစ္စည်းတွေများနေလို့ဆိုပြီး ကျမတို့ ကျောင်းတကျောင်းကို သွားပြီးတော့ ပစ္စည်းပို့ခိုင်းတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကိုကျော်သူက သူကိုယ်တိုင်လည်း လှူချင်တယ် ဆိုတော့ အခုတော့ သူတို့ စီစဉ်ပေးမယ်တော့ ပြောနေတယ်။”
သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ မီးလောင်မှုအတွင်း ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသနေကြရတဲ့ လူနာတွေကို သွားရောက်ကူညီ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့က နေ့လယ်တုန်းကတော့ ကျမတို့ ဆေးရုံကြီးမှာပေါ့နော် လူနာအားလုံး ၆၀ ကျော် ၇၀ လောက်ရှိတယ်။ တယောက်ကို ငွေတသောင်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် လှူခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆီကိုလည်း ဆေး ၅ သိန်းဖိုးလောက် လှူခဲ့ပါတယ်။”
မီးဘေးသင့်သူတွေကို မဟာဝိဇယ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ အနီးအနားရှိ အ.မ.က ၂၀ နဲ့ ၂၄ တွေမှာ လောလောဆယ် နေရာချထားပေးပြီး လာရောက် လှူဒါန်းသူတွေရဲ့ အလှူပစ္စည်းတွေကြောင့် စားဖို့ မပူရဘဲ အိမ်နေရာအတွက်သာ ပူပန်နေရကြောင်း သိရပါတယ်။
မီးဘေးသင့်သူအများစုဟာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ ဂိုဒေါင်တွေအနီးနားရှိ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူအများစုဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၈၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန် ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မူ သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်
ရန်ကုန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ ဆိပ်ရပ်ကွက် ABC ဂိုဒေါင် မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး စာရင်း ရရှိထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်နေ မြို့ခံ လူငယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
" အခုအချိန်ထိ သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီထက်လည်း များနိုင်ပါတယ်။ သတင်းတွေမှာလည်း ၁၇ ဦး သေဆုံးတယ်ပြီး ဖေါ်ပြကြပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်၂ နာရီတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လူအများအပြား သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
တခြား ရန်ကုန် စမ်းချောင်းနေ ရခိုင် လူငယ် တစ်ဦးကလည်း “ ဒီကနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ သတင်းအရတော့ သေဆုံးသူ ၁၇ဦး ရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ က ၆ဦး၊ တခြား အမျိုးသမီး ၅ ဦး ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သေဆုံးသူ အရေအတွက်က ဒီထက်များ နိုင်တယ်လို့လည်း ပြောနေကြပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူက ၁၀၀ နီးပါး ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါ ဒဏ်ရာရသူများကို ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း လူနာ လာကြည့်သူများနှင့် ဆေးရုံတွင် ပြည့်နက်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
" ပေါက်ကွဲမှုက တော်တော်ပြင်းထန်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲသံကို ကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး တုန်လူပ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမူကြောင့် အိမ်တချို့ ၀ုန်းကနဲ ပြိုဆင်းသွားပြီး ခြံဝင်း အုတ်နံရံ အများအပြားလည်း လဲပြိုကျသွားကြောင်း သိရသည်။ အုတ်နံရံ အစများ လွှင့် ပျံ ထွက်လာသဖြင့် ဒဏ်ရာ ရသွားသူ အများအပြား ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
လက်ရှိ သတင်းအရ အဆိုပါ ရပ်ကွက်ထဲရှိ ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံ ၃၇လုံးရှိ သည့် အနက် ၁၆လုံးနှင့် မီးသတ်ကား ၂စီးလည်း မီးထဲ ပါသွားကြောင်း သိရသည်။
ဆုံးရှုံး ပမာဏနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲ မီးလောင်သည်ကိ်ု လောလောဆယ်တွင် မသိရသေးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
မာနယ်ပလော ကွင်းပြင် ထဲကို ပြန်ကြည့် မယ်ဆို ရင်တော့ ဒီလို တောကြီး မျက်မည်း ထဲက သူပုန် ဌာန ချုပ်မှာ လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ လင်းနေ တယ်ဆိုရင်မြန်မာ နိုင်ငံက စာဖတ် ပရိသတ် ယုံပါ့ မလားပဲ။ ကျန်တဲ့မြို့တွေကို အမှောင်ချပြီး နေပြည်တော် ဌာနချုပ် တခု တည်း မီးလင်း နေအောင် စီမံထား တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ခုနက မြင့်မား လှတဲ့ နော်ဒေး တောင်တန်း ပေါ်ကနေ ကျလာ တဲ့ချောင်း ရေကို တမံလုပ်ပြီး အဲဒီကနေ ရေအား လျှပ်စစ်နဲ့ မာနယ်ပလော တခွင်လုံးကို လျှပ်စစ်မီး ပေးထား တာပါ။ ဒါ့အပြင် ရေကိုလည်း ပိုက်တွေနဲ့ သွယ်ပေး ထားတဲ့ အတွက် ရေ၊ မီး အတော် အဆင် ပြေတဲ့ နေရာ။ တီဗီစလောင်း လိုင်းပေါင်းစုံ ရတဲ့ တောတွင်းမြို့တော်လို့ ပြောရင် ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ပဒိုဘသင် အိမ်ကနေ ဘေးပတ်လည်အိမ်တွေကို ကျနော်လေ့လာကြည့််တဲ့အခါ အနီးဆုံးအိမ်က တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစံလင်းရဲ့အ်ိမ်။ အိမ်ပုံစံချင်းက အတူတူပါပဲ။ ဒီအိမ်ဟာ KNU ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာန ရုံးခန်းလည်းဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး သနူးထူးစာစောင် ထုတ်ဝေတဲ့ နေရာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကွန်ပြူတာခေတ် မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် ဖရောင်းစက္ကူကို လက်နှိပ်စက်နဲ့ဖောက်။ မီး ချောင်း နဲ့လှိမ့်ပြီး ကော်ပီကူးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းမှာတော့ ABSDF ဗဟိုရုံးအဖွဲ့မှူးတဦးဖြစ်သူ ဦးရီထွန်း တီထွင် လိုက် တဲ့ ဖရောင်း စက္ကူ ကော်ပီကူး သစ်သားကရိယာလေးတခုက အတော်ခေတ်စားသွားပြီး ကွန်ပြူတာ မပေါ်မီအထိ အဲဒီကရိယာကို တော် လှန်ရေးနယ်မြေတလုံးမှာ သုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်)
ပဒိုစံလင်းအိမ်ရဲ့ရှေ့က ပုံစံတူ အိမ်ကတော့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဌာန၊ နောက်တလုံးက သစ်တောဌာန၊ နောက်ထပ် တလုံးကတော့ ဘဏ္ဍာရေးဌာနဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရုံးတွေပေါ်ကိုတော့ ကျနော်မတက်ဖြစ်လိုက်ပါ။ အဲဒီရုံးတွေ အလွန်မှာတော့ မဒတ (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု) ရုံး၊ ထီးတခီးဘက်ထွက်တဲ့ ကားလမ်းကြောင်းတခုနဲ့ ချောင်းကူးတံတားတခုရှိပါတယ်။ ကားလမ်းကို ကျော်လိုက်တော့ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုသန်းအောင်ရဲ့အိမ် (သူကွန်လွန်ပြီးနောက်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင် ဆက်နေတဲ့အိမ်)။ အဲဒီအိမ်ကနေ ညာဘက်ကို လှည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် တောင်ပေါ်က ဘုရားကျောင်းဆီတက်တဲ့ လူသွားလမ်းတခု။ ပြီးရင် ကျွန်းသစ်တွေနဲ့ အခိုင်မာဆောက်ထားတဲ့ အ ကောင်း စား ၂ ထပ် အဆောက်ဦကြီးတခု (အစောပိုင်းမှာ ဒေါက်တာ မာတာရဲ့ KNU နိုင်ငံခြားရေးဌာနရုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ADNSC [Anti-military Dictatorship National Solidarity Committee] တပ်ပေါင်းစု ရုံးခန်းဖြစ်လာပါတယ်) ရှိပြီး အဲဒီ ဘေးမှာတော့ သစ်ပင်တန်းတခုရှိပါတယ်။ (အဲဒီကာလကတော့ စစ်ရုံးချုပ်အသစ်ကြီး မဆောက်ရ သေးပါ) သစ်ပင်တန်းအဆုံးမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မြရဲ့ ကော်သူးလေအစိုးရ သမ္မတအိမ်ဖြူတော် စံအိမ်ကြီးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စံအိမ်တော်ဆိုတာ တင်စားပြီးခေါ်ဝေါ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ တကယ့်ကို သားနားတဲ့ ၂ ထပ် တိုက်အိမ် အကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဘေးမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မြ ရုံးထိုင်တဲ့ ကျွန်းသစ်သားအိမ် ခပ်သေးသေးတလုံး။ ပြီးရင် KNU အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနဲ့ အမျိုးသမီး ဆောင် တချို့။ ပြီးရင် ဆံသဆိုင်။ ဆံသဆိုင် နောက်ကျောမှာတော့ ကျနော်တို့ ကျိုးဖိုးတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ မာနယ်ပလော ဗဟို စားဖိုဆောင်။ စားဖိုဆောင်ဘေးမှာတော့ ကွန်မန်ဒိုကုန်းဘက်နဲ့ ခွေးအိပ်တောင်ဘက်တက်တဲ့ ကားလမ်းကြောင်းတခု။ ကားလမ်းကို ကျော်ပြီး ဘော်လုံးကွင်းအတိုင်း ပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင် တပ်ထောက်ဌာနနဲ့ ဂိုဒေါင်ကြီးတခုကို သောင်းရင်းမြစ် ကမ်းနားစောင်းဘက်မှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဗိုလ်ချုပ် တာမလာဘော၊ ဗိုလ်ချုပ် ကစယ်ဒို တို့ ရုံးထိုင်တဲ့ စစ်ရုံးချုပ်။ စစ်ရုံးချုပ်ဘေးမှာတော့ ကရင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (KNDO) ရုံးခန်း။
မာနယ်ပလောကို ဒုတိယအခေါက် ကျနော်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်ကတော့ မတ်လ အစောပိုင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်မှာတော့ ကျ နော် တယောက်တည်း။ KNU ကနေ ကျနော်တို့ နယ်မြေကော်မီတီဆီ ထောက်ပံ့နေကြ တလ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၀၀၀ ကို ထုတ်ယူဖို့ ဥက္ကဌ ကိုကျော်ကျော်က ကျနော့်ကို တာဝန်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီငွေ ၃၀၀၀ ရဖို့အရေး ပဒိုဘသင်အိမ်မှာ ထိုင်စောင့်လိုက်ရတာ သီတင်း တ ပတ် ကြာသွား ပါတယ်။
အတွင်းရေးမှူးချုပ်အိမ်မှာ တည်းရတဲ့ ဧည့်သည်ဆိုပေမယ့် ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ပဲ နေ့စဉ်တိုးနေတော့ ကျိုးဖိုးတွေရဲ့ ထုံစံအတိုင်း လဖက် ရည်ဆိုင် ရှာပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တွေ့လိုက်တဲ့ ဆိုင်ကတော့ သောင်ရင်းမြစ်ရဲ့ အလှပဆုံးရှုခင်းကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ခွင့်ရ နေတဲ့ ပဒိုဝီးရဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင်ပါပဲ။ သောင်ရင်းနဲ့ သံလွင်မြစ်ဆုံ ထိုင်းဘက်ကမ်းရှိ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဘန်ဂလိုနေရာကလွဲရင် ဒီဒေသတ၀ိုက်မှာ ဒုတိယ ရှုခင်း အကောင်းဆုံးနေရာဟာ ပဒိုဝီးဆိုင်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူဆိုင်ရှေ့မှာ ကျွန်းပင်အကြီးကြီးတပင်ရှိပြီး အဲဒီအောက်မှာ သစ်သားတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သဘာဝ ထိုင်ခုံတွေကလည်း အတော်ကောင်း ပါတယ်။ လဖက်သုတ်တပွဲမှာ၊ ရေနွေအိုး တကရားနဲ့ အဲဒီ သစ်ပင်အောက်က ခုံတန်းမှာထိုင်ပြီး သောင်ရင်းမြစ်ကို ငေးကြည့် ရတဲ့ အရ သာကို အချိန်ထိ သတိရနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ … အဲဒီသဘာဝအလှအပ ရှုခင်းတွေအပြင်ပေါ့လေ၊ ကျနော်ခဏခဏ သွားဖြစ်တဲ့ နောက် ထပ် အကြောင်းရင်းတခုကတော့ လှပတဲ့ ဆိုင်ရှင်ကောင်မလေး တယောက်ကြောင့်လို့ ၀န်မခံရင် ကျနော် သတင်းထိမ်ချန်ရာ ကျပါ လိမ့်မယ်။
နောက်တနေ့မှာတော့ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်ရဲ့ အိမ်ဘေးကနေ ထီးတခီးဘက်သွားတဲ့ ကားလမ်းအတိုင်း ဆက်လျှောက် ရင်းနဲ့ မဒတရုံးကို ကျနော်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီကာလ ရုံးထိုင်နေသူတွေထဲမှာ ရခိုင်ပါတီက ခိုင်စိုးနိုင်အောင်နဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နိုင်ဟံသာတို့ကို ကျနော်မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီရုံးကို ကျော်ပြီးဆက်သွားတော့ တောင်ကုန်းတခုပေါ်မှာ ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ်ကို တွေ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ ထားဝယ်ကောလိပ်တွေကိုသာ တွေ့ဖူးတဲ့ ကျနော့်အဖို့ ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ် ဆိုတာဟာ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ မြင်နေရတဲ့ အဆောက်ဦးက မြေစိုက် တဲတလုံးသာသာ ဖြစ်ပေမယ့် သင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေက နိုင်ငံ တကာက ရောက်လာသူတွေ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကလည်း နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေကနေ သင့်တော်တာတွေကို ကောက်နှုတ်ထားတဲ့ အနှစ်ချုပ်သင်ရိုး။ ကျောင်းသားတွေကတော့ ထီးတခီး အထက ကနေ ၁၂ တန်းအထိ အောင်မြင်ပြီးတဲ့ ကရင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ လေးတွေ။
ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ်က အပြန်မှာတော့ ကျနော်တို့ မင်းသမီးခစန်းက ရဲဘော် ၂၀ ဦးအပါဝင် ဘုရားသုံးဆူ၊ သီဘောဘိုးနဲ့ တခြား စခန်း အသီးသီးက DAB စစ်ကြောင်းအတွက် ရောက်နေတဲ့ ABSDF ကျောင်းသား ၁၀၀ ခန့်ကို ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ဧည့်သည်တော် ဘားတိုက်မှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် (DAB) စစ်ကြောင်းတွေ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆောင်းပါးအခန်း ၈ မှာ ကျနော်ရေးခဲ့မိပေမယ့် တကယ်ကတော့ ဒီ ပထမအကြိမ် စစ်ကြောင်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ပြန်သိရပါတယ်။ DAB တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနဲ့ ABSDF ဗဟို အတွင်းရေးမှူး ကိုသန်းဝင်း ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ၁၀၀ ၀န်းကျင်ဟာ DAB စစ်ကြောင်းမဖွဲ့နိုင်ဘဲနဲ့ မာနာပလော မှာ သတင်း ၂ ပတ်လောက် သောင်တင်ပြီးနောက် မိခင်စခန်းတွေဆီ ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ် ပြန်ခဲ့ရတယ်လို့ အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ မင်းသမီးခစန်းမှ ကျောင်းသားတဦးက ဒီဆောင်းပါး ရေးနေစဉ် ကျနော်ကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြား ကျနော်မှတ်မိနေတဲ့ အချက်တခုကတော့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်ရိပ်သာမှာ တည်းတဲ့ အမေရိကန်သူ မီမီမြင့်ဖူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးငှက်ဖျားရုပ် ပေါက်နေတဲ့ဒေသမှာ အမေရိကားကနေ ရောက်လာတဲ့ မီမီမြင့်ဖူးကို ကျောင်းသားတွေ အလုအယက် စိတ်ဝင်စားတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ပဒိုဘသင်အိမ်မှာ ကျနော်တည်းနေစဉ် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဦးအောင်ခင်အပါဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တချို့နဲ့အတူ မိမိမြင့်ဖူးတို့အဖွဲ့ ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မီမီမြင့်ဖူးပါတဲ့အဖွဲ့ဟာ DAB ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ ကုလမဂ္ဂအပါဝင် နိုင်ငံတကာဆီ သွားရောက်ဆွေးနွေးတာတွေ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကို တက်ကြွစွာ ဆောင် ရွက် ခဲ့တာ တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ န၀တ ဘက်ကလည်း မြက်ခင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းကနေ ကျောင်းသားတွေနဲ့ မီမီမြင့်ဖူးကို အတုံး လိုက်အတစ်လိုက် ဝေဖန်တာတွေကို ဖတ်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။
၁၉၈၉ အစောပိုင်းကာလက သွားခဲ့တဲ့ ကျနော်ရဲ့ မာနယ်ပလော ခရီးစဉ်အတွင်း မဒတရုံးနဲ့ ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ်ကို ကျော်ပြီး တောင် ဘက် ကို မသွားခဲ့ဖူးပါ။ အဲဒီတောင်ဘက်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းနဲ့ NLD-LA ရုံး၊ လူဘောင် သစ်ပါတီရုံး၊ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂရုံး၊ NCG ရုံးတွေ ရှိပါတယ်။ အလားတူ ဆံသဆိုင်နဲ့ ထမင်းရုံကို ကျော်ပြီး မြောက်ဘက်ကိုလည်း မသွား ခဲ့ဖူးပါ။ မြောက်ဘက်မှာ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ABSDF ဌာနချုပ်ရုံးရှိရာ လောကွာလူကုန်း၊ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ ဗဟိုဌာနချုပ်တောင်ကုန်း၊ ၂၀၈ တောင်ကုန်းနဲ့ ကွန်မန်ဒိုကုန်းတို့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်ရောက်ဖူးတဲ့ မာနယ်ပုလောဆိုတာဟာ ဘောလုံးကွင်းဝန်းကျင်ရှိ ရုံးခန်းတ၀ိုက် သက်သက်မျှသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,30th,2011
( 26 )အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမြင်
( 25 )‘Thane' came from Myanmar
( 24 )လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကျဉ်းသားဘဝမှန် မတွေ့ခဲ့
( 23 )U.S. official to travel to Asia, discuss transition in North Korea
( 22 )အကျဉ်းကျနေသူ မိသားစုတွေကို အားပေး
( 21 )Myanmar may free more prisoners next week
( 20 )Kurt Campbell အရှေ့အာရှခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးမည်
( 19 )Burma may free more prisoners next week
( 18 )မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး အင်ဒိုနီးရှားက ကူညီမည်
( 17 )11 Burmese journos in jail as 2011 comes toaclose
( 16 )မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပေါက်ကွဲမှု သေဆုံးသူ ၂၀ ကျော်
( 15 )The Lady, review
( 14 )မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို လှူဒါန်းသူ များပြား
( 13 )Stars Turn Out for Suu Kyi
( 12 )မြန်မာလူနာများအတွက် မဲဆောက်တွင် ဆေးရုံအသစ် ဆောက်မည်
( 11 )RI helps Myanmar stay on course ahead of ASEAN Community
( 10 )'အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်' ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း အသနားခံစာတင်
(9)Breaking ground
( 8 )ဖားကန့်ရေမဆေးကျောက်သမားများ ဖမ်းဆီးခံရ
(7)Myanmar to build Buddhist shrine in Chinese temple
(6)ထိုင်း​ကုမ္ပဏီများ​ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စား​
(5)Death toll rises in Burma warehouse fire
(4)မေတ္တာမွန်သိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှု ၁၇ ဦးသေဆုံး
(3)News of the Day From Across the Globe
(2)မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပေါက်ကွဲမှု သေဆုံးသူ ၂၀ ကျော်
( 1 )Indonesian FM Calls for More Democratic Reform in Burma
ဖနိဒါ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁
ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့်ဆွေးနွေး သဘောတူ မှုများ ရရှိ နေသော်လည်း ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO တပ်များ နှင့်မူ ထိုးစစ် ဆင်မှုများနေ့စဉ် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး တပ်ရင်း တခုမှာ ဆုတ်ခွာ ပေးလိုက် ရသည်ဟု KIO က ပြောသည်။
ဒီဇင်္ဘာ ၂၅ မှ ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေသည့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း KIO ၏ တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၈ စခန်း သို့ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ကမူ အစိုးရ၏ ခလရ ၆၈၊ ခမရ ၅ဝ၇ တပ်အင်အား ၃ဝဝ ကျော်က ထပ်မံ တိုးမြင့် လာသဖြင့် ရှောင်တိမ်း ပေးလိုက် ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း KIO ပြောခွင့်ရ ဦးလနန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“သူတို့ (အစိုးရ) ထိုးစစ် မလုပ် တော့ဘူး ဆိုတာ အလကား ပြောတာပဲ။ မနေ့က သူတို့ တပ်တွေရဲ့ နဂိုရှိတဲ့ တပ်တွေ ထိခိုက်တာ များ လာ တော့ နောက်ကနေ အသစ်တွေ ထိုးဝင် လာလို့ ကျနော်တို့ ရင်း ၈ ကို ဖယ်ပေး လိုက်ရတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်က အသေခံ ရမှာ စိုးလို့ ကျနော်တို့ နေရာကို ပြောင်းပေး လိုက်တာ ဘဲ ရှိတယ်။ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်လာလို့ ရှောင်လိုက် တာပဲရှိတယ်” ဟု သူက ပြော သည်။
“ဒီနေ့လည်း တပ်မဟာ ၃ တပ်ဖွဲ့ တွေနဲ့ ဗျန်ဝိုင်း ကျေးရွာမှ တိုက်နေတယ်။ ယော်ရုံ တောင်ကို တိုက်ပို့ စစ်ကြောင်းကို ထိုးနေတယ်။ သုံး လေရက် ရှိပြီး တပ်က ဗန်းမော်၊ မိုးမောက် ဘက်က နေတက်လာတာ။ ဇိန်လွန် အထိ ကားနဲ့ လက်နက် အင်အားတွေ လာပို့တယ်။ အဲဒီ ကနေ ခြေလျင်နဲ့ ယော်ရုံဘက်ကို ထိုးနေတယ်၊ လက်နက် ကြီးနဲ့ နေ့တိုင်း ပစ်တယ်”ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထို့ပြင် ကချင်ပြည် နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် လွယ်ဂျယ်နှင့် ဇိန်လွန် အကြားရှိ KIO ၏ တပ်မဟာ ၃ တပ်ဖွဲ့များ အခြေ ချရာ ယော်ရုံတောင် ဘက်သို့ တပ်မ ၈၈ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများ နေ့စဉ် စစ်ကြောင်း များဖြင့် ထိုးစစ် ဆင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ခမရ ၃၈၂၊ ၃၈၃ နှင့် KIO ၏ တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ ရင်း ၁၁ တပ်ဖွဲ့များနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့၏ တောင်ဘက် ၁၅ မိုင်အကွာရှိ အကျဲနှင့် ဖရော်ကျေးရွာ အကြားတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု မြစ်ကြီးနား မြို့ခံ တဦးနှင့် KIO တို့ထံမှ သိရသည်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ဂျာပူကျေးရွာတွင် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃၈၉ နှင့် KIO တပ်ဖွဲ့များ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ၂ နာရီမှ ညနေထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရတပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ သဖြင့် ဂျာပူကျေးရွာတွင် သွယ်တန်း ထား သော လျှပ်စစ်ကြိုး ပြတ်တောက် သွားခဲ့ သည်ဟု ဦးလနန်က ပြောသည်။
ထိုးစစ်များ ရပ်တန့်ရန် ဒီဇင်္ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့ ကတည်းက ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရုံးထံသို့ သမ္မတ ရုံးက ညွန်ကြား လိုက်သည့် နေ့မှစ၍ ယနေ့ထိ အစိုးရနှင့် KIO တပ်ဖွဲ့ အကြား တိုက်ပွဲပေါင်း ၆၈ ကြိမ် ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
KIO ပိုင် ဘူးဂါးကုမ္ပဏီမှ မလိချောင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံမှ သွယ်တန်းသည့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြန်းရေး ဓါတ်အား လိုင်း ယမန်နေ့ညက ပျက်တောက်ခဲ့သည်ဟု မြစ်ကြီးနား မြို့ခံတဦးက “မနေ့ကပဲ ပျက်သွားတော့ အခက်အခဲတော့ မရှိသေးဘူး။ အရင်တခေါက်လိုမျိုး အကြာကြီး ပျက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်မှာပဲ”ဟု သူက မဇ္စျိမကိုပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလကလည်း ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့်ကြာ ပြတ်တောက်သွားခဲ့သဖြင့် ဘူးဂါးကုမ္ပဏီကပြန်လည် ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁
ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့်မြို့ နယ်၌ လူ ၂၀ ကျော် သေဆုံး ခဲ့သော နိုင်ငံပိုင် ဓါတု ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံ မီးလောင် ပေါက်ကွဲ မှုတွင် ဂိုဒေါင် အတွင်းရှိ ဓါတု ပစ္စည်း များ၏ အန္တရာယ်ကို သတိမမူ မိသဖြင့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ကျဆုံး ခဲ့ရ သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ ဌာန များက ပြောသည်။
မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် များမှာ လောင်ကျွမ်းမှု အရှိန်မြင့် နေသည့် မီးကို အမြန်ငြိမ်း စေလိုဇောဖြင့် ငြှိမ်းသတ် နေကြစဉ် ဂိုဒေါင် အတွင်းရှိ မီးကူး လောင်နေ သည့် ဓါတု ပစ္စည်းများမှ ပေါက်ကွဲကာ အရပ်သား ၁၇ ဦးနှင့် အတူ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါ သေဆုံး ခဲ့ရဟု ရန်ကုန် တိုင်း ဗဟိုမီး သတ်ဌာန အရာရှိ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မီးလောင် တယ်ဆို တော့ဗျာ အခြား ဘက်တွေကို မကူး အောင်ဆိုပြီး မီးကိုပဲ အဓိက ထားပြီး ငြိမ်းသတ် နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဒီဓါတု ပစ္စည်း တွေက ထပေါက် ကွဲတော့ အဲဒီမှာ ထိကုန်တာ။ ဒါတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ကျုပ်တို့က မသိဘူး။ ဂိုဒေါင် စောင့်တွေ ကတော့ တချို့က ပစ္စည်း သယ်နေ တုန်းမှာ ထိကုန်တာ” ဟု ပြောသည်။
သေဆုံး သွားသည့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ များမှာ မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့် မီးသတ် ဌာနမှ ၄ ဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟိုမီး သတ် ဌာနချုပ်မှ ၁ ဦးတို့ ဖြစ် ကြောင်းသိရပြီး ကြာသာပတေးနေ့ ညနေပိုင်း တွင်ပင် ရေဝေး သုဿန်၌ အခမ်း အနားဖြင့် မီးသဂြုင်္ိဟ် ပေးခဲ့သည်။
ကြာသာပတေးနေ့ ညနေ ၅ နာရီအထိ နောက်ဆုံး စုံစမ်းသိရှိမှုအရ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသည့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ ၃၁ ဦး၊ အရန် မီးသတ် ၆ ဦးနှင့် အရပ်သား ၅၄ ဦး ပါဝင်သည့် စုစုပေါင်း ၉၁ ဦးကိုလည်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသ မှုခံယူ နေရ ကြောင်း သိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်ရန် ရောက်ရှိလာ သည့် မီးသတ်ကား ၅၇ စီးအနက်မှ ၈ စီးမှာလည်း ပေါက် ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီး ခဲ့ရ သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသော ဂိုဒေါင် ၁၆ လုံး ပျက်စီး ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ ဂိုဒေါင်တခုတွင် သင်္ဘောဆေးနှင့် အမိုးနီးယား၊ ဆာလ်ဖြူရစ်အက်ဆစ်နှင့် ယမ်းစိမ်းတို့ ပါဝင်သော ဓါတုပစ္စည်းများ သိုလှောင် ထားခြင်း သည် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဟု နယ်မြေခံ ရဲအရာရှိများ က ယူဆနေကြသည်။
အစိုးရ အနေနှင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် စေနိုင်သည့် ဓါတု ပစ္စည်းများကို လူနေ ထူထပ်သည့် မြို့တွင်း နေရာများ၌ သိုလှောင်ခြင်း ကို လူအ များက ပြစ်တင် ပြောဆို နေကြ သလို ပေါက်ကွဲမှု များကို ကြိုတင် ရှောင်ရှား နိုင်ရန် စံနစ်တကျ လေ့ကျင့် ပေးထားခြင်း မရှိဟုဆိုကာ မြန်မာ နိုင်ငံ မီး သတ်ဦးစီး ဌာန ကိုလည်း အလားတူ ပြောဆို မှုများ ရှိနေသည်။
ပေါက်ကွဲမှုကတဆင့် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်များသို့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်မှ လူဦး ရေ ၁ ထောင်ခန့်မှာ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ မီးဘေးဒုက္ခအဖြစ်နှင့် အမှတ် ၂ဝ၊ ၂၄ မူလတန်းကျောင်းများနှင့် တာမွေမြို့နယ် ပုသိမ်ညွှန့်ရပ် ကွက်ရှိ မဟာဝိဇယရာမ ကျောင်းတိုက်တို့တွင် ခိုလှုံနေကြကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ယူနေသည့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ဒုရဲမှုး ဦးမျိုးမြင့်ကြိုင်က ပြောသည်။
စစ်တပ်ကား​ဖြင့်​ တိုက်မိပြီး​ ၇ နှစ်အရွယ် က​လေး​တဦး​ ​သေဆုံး​
ပဲခူး​တိုင်း​ ​ဘောနက်ကြီး​အ​ခြေစိုက် တပ်ရင်း​တခုရဲ့​ စစ်ကား​တစ်စီး​က ​ကျောင်း​ကပြန် လာတဲ့​ က​လေး​ငယ် ၃ ဦး​ကို ဝင်တိုက်တဲ့​အတွက် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် က​လေး​ငယ် ​သေဆုံး​ခဲ့​ပြီး​ ကျန်နှစ်ဦး​ ဒဏ်ရာ အပြင်း​အထန် ရရှိခဲ့​ပါတယ်။
သေဆုံး​သွား​တဲ့​က​လေး​ငယ်ဟာ ဒုတိယတန်း​ကျောင်း​သား​ ​မောင်ထက်​ဝေဖြိုး​ဖြစ်ပြီး​ က​လေး​ငယ်​တွေဟာ ​ဘောနက်ကြီး​ရွာမှာ ​နေထိုင်ကြတာပါ။
အခုလ ၁၉ ရက်​နေ့​က ဘုရား​ကြီး​ရွာက အထက်တန်း​ကျောင်း​မှာ ​ကျောင်း​တက်ပြီး​အပြန် ကား​တိုက်ခံရပြီး​ ​သေဆုံး​ခဲ့​တာလို့​ က​လေး​ငယ်မိသား​စုနဲ့​ နီး​စပ်သူတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
“သူ့​ရဲ့​ မိဘ​တွေက​တော့​ ကို​ကျော်​ဌေး​၊​ မစန္ဒာဝင်း​တို့​။ သူတို့​က ​ဘောနက်ကြီး​ရွာမှာ​နေတာ။ ဘုရား​ကြီအထကမှာ ​ကျောင်း​လာတက်ပြီး​ အပြန် ​ကျောင်း​သား​လေး​တွေကို ကား​နဲ့​ ဝင်တိုက်လိုက်တာ ​ကျောင်း​သား​လေး​ တ​ယောက်က​တော့​ ပွဲချင်း​ပြီး​ ​သေသွား​တယ်။ နှစ်​ယောက်က​တော့​ လက်ရှိ ​ဆေး​ရုံတင်ထား​ရတယ်။ အရမ်း​မောင်း​တယ် မထင်ရင် မထင်သလို စစ်တပ်က ကား​တွေက။”
ကား​တိုက်​သေဆုံး​သွား​တဲ့​ က​လေး​ငယ်ကို တပ်က​နေပြီး​ ​လျော်​ကြေး​အ​နေနဲ့​ ကျပ်​ငွေတသိန်း​ပေး​ခဲ့​ပြီး​ ဒဏ်ရာရ သူ​တွေကို ဘာမှ ကူညီတာမရှိဘူး​လို့​ သိရပါတယ်။
ကျန်နှစ်ဦး​ဟာ ၁၀ ​ကျော်သက်အရွယ်​တွေဖြစ်ပြီး​လက်ရှိ ပဲခူး​ဆေး​ရုံမှာ ကုသမှု ခံယူ​နေရပါတယ်။
ဆေး​ရုံတင်ထား​ရတဲ့​ က​လေး​ငယ်တွဟာ ဒဏ်ရာပြင်း​ထန်ပြီး​ စိုး​ရိမ်ရတယ်လို့​ဒေသခံတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
အမှုဖြစ်ပွား​လို့​ ​ဘောနက်ကြီး​ရွာ ရဲစခန်း​က တရား​လိုလုပ် တိုင်ကြား​ထား​ပြီး​ တပ်သား​တဦး​ကို ဖမ်း​ဆီး​ထား​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ ဖမ်း​ဆီး​ထား​တဲ့​ တပ်သား​ဟာ ကား​မောင်း​သူမဟုတ်ဘဲ ကား​မောင်း​သူရဲ့​တပည့်​ တပ်သား​တဦး​ ဖြစ်​နေတယ်လို့​လည်း​ ​ဒေသခံ​တွေက ​ပြောပါတယ်။
ဇာနည်မာန် on December 29, 2011
ဒုက္ခသည်များကို ခိုလှုံခွင့်ပေးထားသည့် မဟာဝိဇယရာမ ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်က “သူတို့ခမျာ ပစ္စည်းတွေက ဘာမှပြန်မရ၊ အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့၊ ငိုယိုနေကြတာ။ စားစရာ၊ သောက်စရာ၊ အ၀တ်အစား၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အားပေးမှုတွေ အများကြီးလိုနေတယ်။ လိုအပ်တာတော့ အကုန်ပဲ။ ဘာဆို ဘာမှကို မရှိတာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာရော၊ ကျောင်းအပြင်ဖက်တွေမှာရော နေရာချထားပေးရတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
အဆိုပါကျောင်းတိုက်တွင် မီးဘေးသင့်ပြည်သူ ၁၂၀၀ ခန့်ကို ယာယီနေရာချထားပေးပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့အပါအ၀င် တခြားလူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ ဆရာဝန်အဖွဲ့များ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထူးကုမ္ပဏီမှ ကူညီမှုများ လာရောက် လုပ်ဆောင်ပေးနေသည်ဟု သိရသည်။
“ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ နည်းနည်းပါးပါး ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်။ သိပ်ပြီး ဒဏ်ရာမသည်းတဲ့သူတွေကို ကျောင်းဆောင်တဆောင်မှာ ထားပြီး ကုသပေးနေတယ်” ဟု ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေသည့် NLD အဖွဲ့ဝင် လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီခန့်က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ အေဘီစီ စက်ဆန်းရှိ ကုန်လှောင်ရုံများ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူနေအိမ်ခြေများ ပြိုကျပျက်စီးပြီး ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်ဖြင့် လွင့်စင်လာသော အပိုင်းအစများ ထိမှန်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ၊ ဒဏ်ရာရသူများ ရှိခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာရသူ ၉၀ ကျော်အနက် ဒဏ်ရာ အလွန်ပြင်းထန်သူများလည်း ပါဝင်နေသောကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ တိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်ရကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူများက ဆိုသည်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ရာ ကုန်လှောင်ရုံအမှတ် ၈၀ မှ စတင်လောင်ကျွမ်းပြီး ယမ်းစိမ်း၊ ကန့်၊ ဇ၀က်သာ စသည့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်သည့် ပရဆေးပစ္စည်းများ သိုလှောင်ရာ ကုန်လှောင်ရုံအမှတ် ၇၉ သို့ မီးကူးကာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၀န်းအတွင်းရှိ ကုန်လှောင်ရုံ ၄၂ အနက် ၁၆ လုံး မီးလောင်ပျက်စီးပြီး ကျန်ကုန်လှောင်ရုံများလည်း ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်ဖြင့် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ အနီးရှိဆိပ်ကမ်းတွင် ကပ်ထားသော သင်္ဘောနှစ်စီးလည်း ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှု ကျပ်သိန်း တထောင်နီးပါးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“မီးလောင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းမြစ်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အသေးစိတ် အခြေအနေတွေကို လူကြီးတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟိုမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
သေဆုံးသူများတွင် တာမွေ မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ရဲဘော် ၅ ဦး၊ အရပ်သား ၁၂ ဦးပါဝင်ပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၉၁ ဦးတွင် မီးသတ်ရဲဘော် ၃၇ ဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရသူများကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း၊ အိမ်ထောင်စု ၂၂၆ စုနှင့် လူဦးရေထောင်ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
မီးလောင် မှုဖြစ်ပွားသည့် ဂိုဒေါင် များမှာ ပုဂ္ဂလိ ကသို့ လွှဲပြောင်း ထားသော ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင် ရုံမျာ ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ ရုပ်မြင် သံကြား သတင်းက သတင်း ထုတ်ပြန် သွားသည်။
မြန်မာသတင်းသမားများ လွတ်မြောက်ရေး ဖိအားပေးရန် ကုလက...
၂၀၁၀-၁၁ အတွင်း မြန်မာမှ US$ ၁၇၅ သန်းကျော် ကုန်ပစ္စည...
၇ လအတွင်း​ ​ကေအိုင်အိုစခန်း​ ၆ ခု ​နောက်ဆုတ်​ပေး​ခ...
ရန်ကုန် ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မူ သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး ရှိပြီ...
စစ်တပ်ကား​ဖြင့်​ တိုက်မိပြီး​ ၇ နှစ်အရွယ် က​လေး​တဦ...
ရန်ကုန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မီး ၁၇ ဦးသေဆုံး
မင်္ဂလာ​တောင်ညွန့်​မြို့​နယ် မီး​လောင်၊​ ​သေဆုံး​ ဒဏ...
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူ​ရေး​ မြန်မာနှင့်​ အင်ဒိုနီး​ရှာ...
ကေအိုင်​အေနှင့်​ အစိုး​ရတပ် တိုက်ပွဲများ​ ဆက်လက်ဖြ...
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၁၂
ပုဇွန်တောင် ပေါက်ကွဲမူ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦးသေ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,29th,2011
အပြောင်းအလဲ ဆက်လုပ်ရန် နေပြည်တော်ကို အင်ဒိုတိုက်တွန်း
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ မွန်ပြည်သစ်ကို သတိကြီးေ...
အင်ဒို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဒေါ်စု တွေ့ဆုံ
မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်ကားလမ်းတွင် KIA နှင့် အစိုးရ...
အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အင်းစိန်ထောင် စစ်ဆေး
KIA နှင့် အစိုးရတပ် ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေ
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူ တစ်ဦးက လယ်များကို မိမိ...
ရွှေဘိုထောင်မှ ကချင်အမျိုးသမီးများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသ...
ပေါင်မြို့ မိုးနိုင်းမီးဘေး ကလေးငယ်နှစ်ဦး သေဆုံး
ယူဒဗလျူအက်စ်​အေ ဝအဖွဲ့​နှင့်​ အစိုး​ရငြိမ်း​ချမ်း​...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,28th,2011
ဗိုလ်ချုပ်က​တော် ကွယ်လွန်ခြင်း​အထိမ်း​အမှတ် ဘာသာေ...
ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်မည် မဟုတ်’ ကိစ္စပါ စာတ စောင် သ...
ကျောက်ဖြူ၌ ကျင်းပမည့် RNDP လူထု စည်းဝေးပွဲ ခွင့်ပြ...
ဒီမိုကရေစီ ဦးစားပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ကု...
နေပြည်တော် နှင့် UNFC တွေ့ဆုံရန် ပဏာမ အဆင့်လမ်းခင်...
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အတွက် ဒေါ်စု ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လှူ
ပြည်သူ့စစ်ပိုင် ဘိန်းချက် စခန်းတခု သျှမ်းပြည် တပ်မ...
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၁၀
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,27th,2011
ကရင်နှစ်ကူးပွဲများ အကန့်အသတ်ဖြင့် ကျင်းပ
ရခိုင်မျိုးစောင့်အုပ်စုမှ ပြုလုပ်မည့် တော်လှန်ရေးသ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက် ကွဲလွဲနေဆဲ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,26th,2011
မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအုန်းမြင့် ကြိုဆို
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ Dec,25th,2011
အစိုးရတပ်လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုရပ်နား ကချင်ဒုက္ခ...
မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးထံ ဘိန်းဖြူ ၁၀ ဟောင် ဖမ်းဆီး
အပစ်ရပ်နှစ် ၂၀ ကျော် မိုင်းလား၌ အခြေခံပညာအဆင့်ပင် ...
အဲ့ဒီအခန်းဖြတ် အလှူ့ရှင်၊ ပျော်ပျော်ကြီး ဆိုကြတီြး...